08/23/13 ~ Myanmar News Updates
11:42:00 PM Myanmar Newsupdates No comments
(၁) ကလေးရဲ့သေဆုံးနိုင်ခြေက လသားအရွယ်မှာ အကြီးမားဆုံး ဖြစ်ပါတယ်။
မွေးကင်းစ ကလေးကို စောင့်ရှောက်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ လမစေ့ကလေးမွေးတာ၊ ပိုးဝင် တာနဲ့ အသက်ရှူလမ်းကြောင်း ပိတ်ဆို့တာတွေကြောင့် မွေးကင်း စကလေးသေဆုံးနိုင်ခြေ အများ ဆုံး ဖြစ်ပါတယ်။
ကလေးတွေက တစ်လသားအရွယ်မှ ငါးနှစ်အထိ နမိုးနီးယားရောဂါ၊ ဝမ်းပျက်ဝမ်း လျှောတာနဲ့ ငှက်ဖျားရောဂါတွေ ကြောင့် အဓိက သေဆုံးမှုဖြစ်စေ နိုင်ပါတယ်။ အာဟာရချို့တဲ့မှု ဟာ ကလေးသေဆုံးမှု အားလုံး ရဲ့ သုံးပုံတစ်ပုံကျော်ရှိပါတယ်။
(၂) ၂၀၁၁မှာ ကလေးသုံးသန်းနီးပါးဟာ မွေးပြီး တစ်လအတွင်း သေဆုံးခဲ့ကြပါတယ်။
မွေးကင်းစအရွယ်ဟာ နု နယ်လွန်းပါတယ်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင် စဉ် စောင့်ရှောက်မှုကောင်းကောင်း ပေးတာ၊ ကျွမ်းကျင်သူနဲ့ မွေးဖွား တာ၊ လသားအရွယ်ကလေးငယ် ကို သေချာပြုစုစောင့်ရှောက်တာ၊ မိခင်နို့ချိုတစ်မျိုးတည်း တိုက်ကျွေး တာ စတဲ့နည်းတွေနဲ့ မွေးကင်း စကလေးတွေရဲ့ ကျန်းမာရေး အန္တရာယ်ကို လျှော့ချနိုင်ပါတယ်။
(၃) နမိုးနီးယားရောဂါဟာ အသက်ငါးနှစ်အောက် ကလေးတွေမှာ သေဆုံးစေနိုင်တဲ့ အကြီးမားဆုံး အကြောင်းရင်း ဖြစ်ပါတယ်။
၂၀၁၁ ခုနှစ်မှာ နမိုးနီးယား ရောဂါကြောင့် အသက်ငါးနှစ် အောက်ကလေး ၁ဒသမ၂သန်း နီးပါး သေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ နမိုးနီးယားရောဂါဖြစ်နှုန်းကို လျှော့ချ နိုင်ဖို့ ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံတာ၊ မိ ခင်နို့ချို တစ်မျိုးတည်း တိုက်ကျွေး တာနဲ့ အာဟာရ အလုံအလောက် ကျွေးတာတို့ လုပ်ရပါမယ်။
(၄) ပဋိဇီဝပိုးသတ်ဆေးနဲ့ အောက်ဆီဂျင်ဟာ အသက် ကယ်ကိရိယာတွေ ဖြစ်ပါတယ်။
ဝမ်းလျှောရောဂါဟာ ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံတွေက ကလေးတွေမှာ နာမကျန်းမှုနဲ့ သေဆုံးနိုင်ခြေများတဲ့ ရောဂါပါ။ မိခင်နို့ချို တစ်မျိုးတည်း တိုက်ကျွေးတာက ကလေး ငယ်တွေကို ဝမ်းပျက်ဝမ်းလျှော ရောဂါမဖြစ်အောင် ကာကွယ်နိုင် ပါတယ်။ ဝမ်းပျက်နေတဲ့ ကလေး ကို ဓာတ်ဆားရည်နဲ့ ဇင့်အားဖြည့် ဆေးတိုက်ကျွေးပြီးကုသနိုင်ပါတယ်။
(၅) တစ်မိနစ်ကြာတိုင်း ကလေးတစ်ဦးဟာ ငှက်ဖျားရောဂါနဲ့ သေဆုံးနေပါတယ်။
အသက် ငါးနှစ်အောက်က လေးတွေမှာ သေဆုံးမှု ဖြစ်စေတဲ့ အကြောင်းရင်းတစ်ခုပါ။ ခြင် သေစေတဲ့ ဆေးစိမ်ခြင်ထောင် ဟာ ငှက်ဖျားရောဂါ ကူးစက်မှုမ ဖြစ်အောင် ကာကွယ်ပေးပြီး ကလေးတွေရဲ့ အသက်ရှင်သန် နှုန်းကို တိုးမြင့်စေနိုင်ပါတယ်။ ငှက်ဖျားကုသဆေးတွေနဲ့ စော စောကုသမှုပေးတာက အသက် ကယ်တင်နိုင်ပါတယ်။
(၆) HIV ပိုးးရှိသိသူ ကလေး ၉၀ ရာခိုင်နှုန်းကျော်ဟာ မိခင်ကနေ ကလေးကို ကူးစက်ခံရတာ ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။
HIV ပိုးရှိတဲ့ မိခင်ဟာ ကလေးမွေးမယ်ဆိုရင် ဆေးကုသ မှု၊ ဘေးကင်းတဲ့ မွေးဖွားမှုနဲ့ ဘေးကင်းတဲ့ နို့ချိုတိုက်ကျွေး မှုစတဲ့ နည်းတွေသုံးပြီး ကလေး ဆီကို HIV ပိုးမရောက်အောင် ကာကွယ်နိုင်ပါတယ်။ အသက် ၁၅နှစ်အောက် ကလေးနှစ်သန်း ခန့်ဟာ HIV ရှိနေကြပြီး နေ့ စဉ် ကလေးတစ်ထောင်ကျော်က ပိုး အသစ် ကူးစက်ခံနေရပါတယ်။ HIV ပိုးရှိတဲ့ ကလေးတွေကို ART ကုထုံးတွေ သုံးရင် အသက် ရှင်နှုန်းများပြီး ဘဝအရည်အ သွေးတိုးတက်လာပါလိမ့်မယ်။
(၇) ၂၀၁၁မှာ ကလေး သန်း ၂၀ ခန့်ဟာ ရုတ်တရက် အာဟာရချို့တဲ့မှု ပြင်းပြင်းထန်ထန် ခံစားနေရပါတယ်။
ရုတ်တရက်အာဟာရချို့ တဲ့မှု ပြင်းပြင်းထန်ထန် ခံစားရ တာကြောင့် ကလေးတွေကိုနာမကျန်းမှုကြီးစွာ ဖြစ်စေနိုင်ပြီး စော စောစီးစီး သေဆုံးနိုင်ခြေများပါ တယ်။ အိမ်မှာ ကလေးအများစု ကို အဆင်သင့် ဆေးဖက်ဝင်အစာ (Ready-to-use therapeutic foods)တွေနဲ့ ကုသနိုင်ပါတယ်။
(၈) ကလေးသေဆုံုံးမှုရဲ့သုံးပုံ နှစ်ပုံခန့်ကို ကာကွယ်လို့ရပါတယ်။
အသက် ငါးနှစ်အောက်ကလေး တွေကို ထိရောက်တဲ့ စောင့်ရှောက်မှု၊ ကာကွယ်မှုနဲ့ ဂရုစိုက်မှုတွေ လုပ်ပေးရင်အသက်အန္တရာယ် မထိခိုက်အောင် ကာကွယ်နိုင်ပါတယ်။
စိတ်ဆိုတာ တည်တည်ငြိမ်ငြိမ် နေတတ်တာ နည်းပါတယ်။ ဗုဒ္ဓကတော့ စိတ်၏သဘောသဘာဝတွေကို နာယူသူ စရိုက်အနေထားကြည့်ပြီး နည်းစုံအောင် ဟောသွားခဲ့တယ်။ အငြိမ်မနေတတ်လို့
မျောက်နဲ့လဲတူတယ်။ ပျာယာခတ် အိနြေ္ဒမရလွန်းလို့ ကျားလိုက်ခံရတဲ့ သမင်လိုပဲ။ အဝေးဆုံးက အာရုံကို ဖမ်းယူနိုင်စွမ်းရှိလို့ အပြေးမြန်တဲ့ မြင်းလိုပဲတဲ့။ မကောင်းဘူးဆိုတာ
သိပေမဲ့ တားမရလွန်းလို့ လိုက်လျှောရတာ များတယ်။ စိတ်နောက် ကိုယ်ပါရလို့ မကောင်းမှု့မှာပဲ ပျော်မွေ့တတ်တယ်။
စိတ်ဟာ ညစ်နွမ်းတဲ့ ကိလေသာနဲ့ ပေါင်းသင်းမိရင် သောက ရောက်ရတယ်။ ပူရတယ်။ စိုးရိမ်ရတယ်။ ကိုယ့်အတွက် ခွန်အားမဖြစ်ဘူးဆိုတာ သိနေပေမဲ့ တွေးနေမိတတ်တယ်။ ပူနေမိ ၀မ်းနည်းနေမိတတ်တယ်။ ကိုယ့်အတွက် အကျိုးမရှိဘူးဆိုတာ သိပေမဲ့ လက်ခံနေမိတတ်တယ်။ ညစ်နွမ်းတဲ့ အပူအတွေးသံသရာမှာ ရုန်းမထွက်နိုင်ပဲ မျောနေမိတတ်တယ်။ တခါတလေ ချစ်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ် မုန်းလို့ပဲဖြစ်ဖြစ် စိတ်ထဲမှာ ကိုယ့်အလုပ်ထက် အရေးပေး နေရာပေးနေရတတ်တယ်။ အိပ်ရာပေါ် လှဲနေရပေမဲ့ အိပ်မရပဲ ညဉ့်တာရှည်ရတတ်တယ်။ သဘောထားမမှန်တဲ့စိတ်ဟာ အလုပ်ကိစ္စကို အနှောင့်အယှက်ပေးတတ်တယ်။
စိတ်မတည်ငြိမ်လို့ ရုပ်လဲ မတည်ငြိမ်ဘူး။ စိတ်လှုပ် ရုပ်လှုပ်တဲ့ သူဟာ ဆောက်တည်ရာမဲ့လာတတ်တယ်။ အဖြေမတွေ့ရင် အစားပျက် အအိပ်ပျက် ဖြစ်တတ်တယ်။ တန်ဘိုးကြီးတဲ့ ကျန်းမာခြင်း ဆုလာဒ်တွေ ဆုံးရှုံးတတ်တယ်။ ကိုယ်မလိုချင်ပဲ နေရာယူနေတဲ့ ကိုယ့်သန္တာန်က မကောင်းတဲ့ အတွေးတွေကို ဘယ်လိုဖြေဖျောက်မလဲ။ ဖြေရှင်းမလဲ။ မြတ်ဗုဒ္ဓညွန်ပြပေးထားတဲ့ နည်းလမ်း ငါးခုရှိတယ်။
(၁) အာရုံပြောင်းပြီးတော့ ဖြေရှင်းပါ။ ဖျောက်ဖျက်ပါ။
(၂) အပြစ်ကို ဆင်ခြင်သုံးသပ်ပြီးတော့ ဖြေရှင်းပါ။ ဖျောက်ဖျက်ပါ။
(၃) မေ့ပစ်ခြင်းဖြင့် ဖြေရှင်းပါ။ ဖျောက်ဖျက်ပါ။
(၄) ဇစ်မြစ် အရင်းအမြစ်ကို ရှာဖွေပြီးတော့ ဖြေရှင်းပါ။ ဖျောက်ဖျက်ပါ။
(၅) နောက်ဆုံး စိတ်ကို စိတ်နဲ့ဖိညှစ်ပြီး မရရအောင် ကြိုးစားကာ ဖြေရှင်းပါ။ ဖျောက်ဖျက်ပါ။
ဆရာတော် ဒေါက်တာနန္ဒမာလာဘိဝံသကလဲ ဒါကို အထူးဟောကြားဘူးပါတယ်။ စိတ်ဆိုတဲ့ အရာက နမ်တရားဖြစ်တော့ သိမ်မွေ့တယ်။ နုညံ့တယ်။ ကိုင်တွယ်ရတာ ခက်တယ်။ နုညံ့လေလေ ကိုင်တွယ်ရတာ ခက်လေလေပဲ။ နည်းလေးတွေသိပြီးတော့ ကိုယ့်ကိုယ်ဒုက္ခမဖြစ်အောင် နေထိုင်သင့်တယ်။ သတိထား ဉာဏ်အားလေးနဲ့ အေးချမ်းအောင် ပျော်ရွှင်အောင် နေသင့်တယ်။
စိတ်ထောင်းကိုယ်ကြေ စိတ်ပျိုကိုယ်နုမို့ သတိထား ရမယ်။ ကောင်းတဲ့ကံ ကောင်းတဲ့စိတ် ကောင်းတဲ့ဥတု ကောင်းတဲ့အဟာရ မျှမျှတတ ဖြစ်အောင် ဖတ်တီးယူရမယ်။ ဒါမှ စိတ်ကော ရုပ်ကော မပျက်စီးသင့်တာ မပျက်စီးပဲ ဘ၀မှာ သက်တန်းစေ့ နေပြီး တန်ဘိုးရှိတဲ့ အလုပ်တွေ များများလုပ်နိုင်မှာဖြစ်တယ်။
မကောင်းတဲ့ စိတ်နေစိတ်ထားတွေ လက်မခံမိပါစေပဲ ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့တဲ့ ဘ၀လေးတွေ ပိုင်ဆိုင်နိုင် ကြပါစေ၊ စိတ်မှာ စွမ်းအားတွေ ခွန်အားတွေရှိလို့ ကောင်းတဲ့ စွမ်းအားတွေ ခွန်းအားတွေ ကိုယ့်ဘ၀မြင့်သထက်မြင့်အောင် ဖန်တီးရယူနိုင်ကြပါစေလို့ မျှဝေလိုက်ပါတယ်။
အောက်ပါ ရောဂါရှိသူ မိမိချစ်သူကို ကိုယ်ဝန် တားဆေး မတိုက်ပါနှင့်
11:40:00 PM Myanmar Newsupdates No comments
(၁) ပဋိသန္ဓေ တားဆေးကြောင့် သွေးပြန်ကြော ပိတ်ခြင်း၊ သွေးပြန် ကြောအတွင်း သွေးခဲခြင်းတို့ ဖြစ်တတ် သည်။ ဆေးသုံးစွဲ သူများတွင် ဤကဲ့သို့ ဖြစ်ရန် ၂ ဆမှ ၁၁ ဆအထိ အန္တရာယ် ပိုမိုကြောင်း သိရသည်။ ဦးနှောက်တွင်း သွေးကြောကျဉ်းခြင်း၊ ပိတ်ခြင်းမှာ သုံးစွဲသူများတွင် ၂ ဆပိုမိုဖြစ်တတ်သည် နှလုံးသွေး ကြောကျဉ်း ရောဂါနှင့် နှလုံးသွေးကြော ပိတ်ရောဂါများလည်း ဆေးသုံးစွဲသူများတွင် ပိုမိုဖြစ်တတ်သည်။ အထူးသဖြင့် အသက်(၃၅)နှစ် ကျော်ပြီး ဆေးလိပ် သောက်သူ၊ သွေးတိုးရှိသူ၊ ဝလွန်းသူနှင့် ဆီးချိုရောဂါ ရှိသူများတွင် ပိုမိုအန္တရာယ်များ ပါသည်။ တားဆေးကို အသက် ၃၅ နှစ်ကျော် အထက် အမျိုးသမီးများ တွင် ဆေးကို ၅ နှစ်ဆက် တိုက်စား လာပါက သွေးကြောကျဉ်းရောဂါ များကြောင့် သေဆုံးမှုမှာ ၁၀ ဆကျော် များပြားလာကြောင်း တွေ့ရသည်။
(၂) မျက်စိအတွင်း ခံအာရုံကြောကို ရောင်စေသည်။ ဆေးသောက် နေစဉ် မျက်စိမှုန်လာခြင်း၊ မျက်ခွံ ကျခြင်းတို့ ဖြစ်ပေါ်လာပါက ဆေးကို ရပ်ပြီး မျက်စိစမ်းသပ်ရန် လိုအပ်သည်။
(၃) ပဋိသန္ဓေတားဆေးကို ကြာရှည်စွာ သောက်သုံးက ရင်သား၊သား အိမ်၊သားဥ အိမ်နှင့် သားအိမ်ခေါင်း ကင်ဆာဖြစ်ရန် အလားအလာ ရှိသည်။
(၄) ပဋိသန္ဓေ တားဆေးကြောင့် အသည်း၊ အကျိတ်လုံး ပေါက်ခြင်း၊ အသည်းရောင်ခြင်း၊ အသည်း မာခြင်းနှင့် အသည်းကင်ဆာ ဖြစ်တတ်ခြင်း။
(၇) သွေးဆင်းများခြင်း၊ အနည်းငယ် ဆက်တိုင်ဆင်းခြင်း၊ ရာသီသွေး မလာခြင်းစသော ရာသီသွေး မမှန်သည့် ရောဂါလက္ခဏာများ ပေါ်တတ်။
(၈) ကိုယ်လက်ရောင်ခြင်း၊ ဖောခြင်း၊ ဆေးဖြတ်လိုက်သော်လည်း မြုံသွားခြင်း၊ ရာသီလာစဉ်နာကျင် ကိုက်ခဲခြင်း၊ သားမြတ်ရောင်ခြင်း၊ ကိုယ်အလေးချိန် တက်ခြင်း၊ ကိုယ်အလေးချိန်ကျခြင်း၊ ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ အရေပြားယားနာပေါက်ခြင်း၊ စိတ်ညစ်ခြင်း၊ စိတ်လှုပ်ရှား လွယ်ခြင်း၊ မျက်စိ တိမ်ကွယ်ခြင်း၊ ဖိုမစိတ်ဆန္ဒ အပြောင်းအလဲ ရှိခြင်း၊ အစားအသောက် ပျက်ခြင်း၊ ခြေလက် ထုံကျဉ်ခြင်း၊ ခေါင်းမူးခြင်း၊ နှာမွှန်ခြင်း၊ မောပန်းလွယ် ခြင်း၊ခါးကိုက်ခြင်း၊ နှုတ်ခမ်းမွေးများ ပေါက်ခြင်း၊ ဆံပင်ကျွတ်ခြင်း၊ ယားယံ ခြင်း၊ အရေပြား အောက်သွေးယိုခြင်း၊ သွေးအားနည်းခြင်း၊ ဝမ်းကိုက်ခြင်း၊ သွားဖုံးရောင်ခြင်းနှင့် အဆစ်အမြစ် ရောင်ခြင်းတို့ ဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါသည်။
အထိုင်များသော အလုပ်ကြောင့် စောစောစီးစီး သေဆုံးစေနိုင် .......
တစ်ခါ ထိုင်ရင် သုံး-လေး နာရီကျော် ကြာတဲ့ သူတွေကို လေ့လာခဲ့ရာ စောစော စီးစီး
သေဆုံးနိုင်ခြေ မြင့်မားနေတယ်လို့ လေ့လာမှု နှစ်ခုအရ သိရပါတယ်။ အမေရိကန်လေ့လာမှုအရ တစ်နေ့ ခြောက်နာရီထက် ပိုမိုထိုင်ပြီး လေ့ကျင့် ခန်း မလုပ်တဲ့ အမျိုးသမီးတွေက အချိန် မတိုင်မီ စောစောသေဆုံးနိုင်ခြေ ၇၀ ရာ ခိုင်နှုန်းကျော် ပိုမိုမြင့်မားကြောင်း၊ အမျိုး သားတွေမှာတော့ အချိန်မတိုင်မီ စောစော သေဆုံးနိုင်ခြေ ၅၀ ရာခိုင်နှုန်း ပိုမိုမြင့် မားကြောင်း လေ့လာ တွေ့ရှိရပါတယ်။ ဩစတြေးလျလေ့လာမှုအရ တစ် နေ့ ၁၁နာရီကျော်ထိုင်တဲ့သူတွေက
အချိန်မတိုင်မီ စောစောသေဆုံးနိုင်ခြေ ၄၀ရာ ခိုင်နှုန်းပိုမိုမြင့်မားကြောင်း တွေ့ရှိရပါ တယ်။
လေ့လာမှုနှစ်ရပ်အရ လူတွေက အ ထိုင်များလေလေ၊ ဘဝသက်တမ်းတိုဖို့ အ ခွင့်အလမ်း ပိုများလေလေ ဖြစ်တာကို တွေ့ရပါတယ်။
အထိုင်များတဲ့ အလုပ်လုပ်ရသူတွေအ နေနဲ့ နာရီဝက်ကြာ ထိုင်ပြီးတိုင်း မတ် တပ်ရပ်ပေးဖို့လိုပါတယ်။
ဖုန်းကို ရပ်ပြီး ပြောတာ၊ လက်ကိုင် ဖုန်း ကို လမ်းလျှောက်ပြီး ပြောတာမျိုးလုပ်ပါ။
လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေနဲ့ စကားပြော ရာမှာ အီးမေး၊ ချက်တင်တွေနဲ့ ပြော မယ့်အစား သူတို့ဆီကို သွားရောက်ပြီး ပြောပါ။
နာရီများစွာ ကြာကြာထိုင်ပြီး အလုပ် လုပ်မယ့်အစား မကြာခဏ ရေသောက် လိုက်၊ အိမ်သာသွားလိုက်(ဆီးသွားလိုက်) လုပ်ပေးပါ။
11:20:00 PM Myanmar Newsupdates No comments
11:12:00 PM Myanmar Newsupdates No comments
အကြမ်းခံတဲ့ ဖုန်းတွေဟာ မာကျောတဲ့ ပုံစံရှိရုံ သာမက ဖုန်းအတွင်းပိုင်းကို သဲဝင်တာ၊ ရေ၀င်တာတွေပါ ကာကွယ်နိုင်ပြီး သင်နဲ့အတူ အချိန်အကြာကြီး ရှိနေစေမှာပါ။ အခုလည်း မြန်မာအိုင်စီတီ ပရိသတ်တွေ အတွက် ရေစိုခံစမတ်ဖုန်းတွေကို ရွေးချယ်တင်ဆက် ပေးလိုက်ပါတယ်။ ဒီဖုန်းတွေဟာ Water Proofingအတွက်တော့ အတိုင်းအတာ တစ်ခုအထိ စိတ်ချရပြီး ရေအိုင်ထဲ ပြုတ်ကျသွားခဲ့ရင်တောင် စိတ်ပူစရာ မရှိပါဘူးလို့ ဆိုပါတယ်။
၁။ နံပါတ်တစ် ရေစိုခံ စမတ်ဖုန်းကတော့ Samsungရဲ့ Galaxy S4 Activeပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါဖုန်းဟာ အန်းဒရွိုက်ဗားရှင်း 4.2.2(Jelly Bean)နဲ့ အလွန်တရာ မြန်ဆန်တဲ့ Processor, တောက်ပတဲ့ ငါးလက်မအရွယ် မျက်နှာပြင်တို့နဲ့အတူ ကြော့မော့လှပစွာနဲ့ မျက်စိကျစရာ ဒီဇိုင်းလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ဖုန်ဝင်ခြင်း၊ ရေစိုခြင်းတို့မှ ကာကွယ်ပေးနိုင်ပြီး ရေအောက်မှာ ရိုက်ကူးနိုင်တဲ့ ကင်မရာပါဝင်တဲ့ အချက်ကလည်း လူတွေကို ဖမ်းစားသွားစေ ပါတယ်။ ရေအနက်သုံးပေ (တစ်မီတာ)အနက်မှာ မိနစ်သုံးဆယ်ကြာအောင် ဖုန်းကို အသုံးပြုနိုင်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
၂။ နောက်ထပ် ဖုန်းတစ်လုံးကတော့ Sony Xperia Zရေစိုခံဖုန်း ဖြစ်ပါတယ်။ အန်းဒရွိုက်ဗားရှင်း 4.1အသုံးပြု ထားပြီး ကောင်းမွန်တဲ့ကင်မရာ၊ မြန်ဆန်တဲ့ Processorတွေနဲ့အတူ ကြာရှည်ခံတဲ့ Batteryလည်း ပါဝင်လာတာကို တွေ့ရပါတယ်။ Batteryကို ဖြုတ်လို့တော့ ရမှာ မဟုတ်ပါဘူး။
၃။ Kyocera Hydro Edgeဆိုတဲ့ ရေစိုခံစမတ်ဖုန်းပါ။ Waterproof, Dustproofဖြစ်ရုံသာမက လေးလက်မအရွယ် မျက်နှာပြင်နဲ့ အနည်းငယ်ထူပြီး ကိုင်ဆောင်ရလွယ်ကူတဲ့ ပုံစံဟာ ဖုန်းကို ရေစိုနေရင်တောင် အဆင်ပြေစေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အန်းဒရွိုက်ဗားရှင်း 4.1အသုံးပြုထားပြီး 5MPကင်မရာနဲ့ CPU 1GHzရှိတယ်လို့ သိရပါတယ်။
၄။ နောက်ထပ် ရေစိုခံ စမတ်ဖုန်းကတော့ Casioက ထုတ်လုပ်တဲ့ Gz’One Commando 4G LTEပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ရေစိုခံရုံသာမက 4Gကွန်ရက်မှာပါ ချိတ်ဆက် အသုံးပြုနိုင်ပြီး အန်းဒရွိုက် 4.0(ICS) ထည့်သွင်းထားတဲ့ အကြမ်းခံ စမတ်ဖုန်းတစ်လုံး ဖြစ်ပါတယ်။
၅။ NEC Terrainဆိုတဲ့ ရေစိုခံ QWERTYခလုတ်နဲ့ စမတ်ဖုန်းကတော့ အားလုံးထဲမှာ ထူးခြားနေမှာပါ။ Push-To-Talk ဆိုတဲ့ Featureလည်း ပါဝင်ပြီး အန်းဒရွိုက်ကို 4.0(ICS) အသုံးပြုထားကာ CPUအမြန်နှုန်းလည်း 1.5 GHzရှိ ပါတယ်။ ဖုန်းတွင်း မှတ်ဥာဏ် 8GBပါဝင်ပြီး SD Cardကို 32GBအထိ ထပ်မံ ထည့်သွင်းအသုံးပြုနိုင် ပါတယ်။ Bluetooth v4.0ပါဝင်ပြီး အဆင့်မြင့် စမတ်ဖုန်းတစ်လုံး ဖြစ်ပါတယ်။
၆။ နောက်ဆုံး တင်ဆက်ပေးချင်တဲ့ စမတ်ဖုန်းကတော့ တရုတ်နိုင်ငံ ZTEမှ ထုတ်လုပ်တဲ့ ZTE Reefဖုန်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်းဖုန်းဟာ ရေအောက်အနက် သုံးပေမှာ မိနစ်သုံးဆယ်ကြာ ထားနိုင်ရုံ အန်းဒရွိုက်ဗားရှင်း 4.1ကို အသုံးပြုထားပြီး 3Gကွန်ရက်မှာ ချိတ်ဆက်နိုင်မယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
11:05:00 PM Myanmar Newsupdates No comments
ရန်ကုန်မြို့လယ်ကောင် ယာဉ်ရပ်နားမှုအား စင်ကာပူနိုင်ငံစံနှုန်းဖြင့် တိုင်းတာပါက ၂၀ ရာခိုင်နှုန်းခန့် ပိုမိုများပြား
10:45:00 PM Myanmar Newsupdates No comments
ရန်ကုန်မြို့လယ်ကောင်၌ ယာဉ်ရပ် နားမှုအား စင်ကာပူနိုင်ငံ၌ သတ်မှတ်ထားသော စံနှုန်းဖြင့် တိုင်းတာပါက ၂၀ ရာခိုင်နှုန်းခန့် ပိုမိုများပြားနေကြောင်း သတင်းရရှိသည်။ယင်းကဲ့သို့ ရန် ကုန်မြို့လယ်ကောင်အတွင်း ယာဉ်ရပ်နားမှု ပိုမိုများပြားနေခြင်းကြောင့် အထပ်မြင့် အဆောက်အအုံများ တည်ဆောက်ရာ၌ ကားပါကင်ပြုလုပ်ရန် သတ်မှတ်ထားချက်မှာ စင်ကာပူနိုင်ငံ၏ အများ ဆုံးထားရှိရမည့် စံနှုန်း၏ ၂၀ ရာ ခိုင်နှုန်း အပိုထပ်ဆောင်း ထားရှိရကြောင်း ‘အထပ်မြင့်အဆောက်အအုံ စိစစ်ရေးကော်မတီ’မှ သိရသည်။
“ရန်ကုန်မြို့တွင်း ယာဉ်ကြောကျပ်တည်းမှုတွေမှာ ယာဉ်အစီးရေ ပမာဏများလာလို့ မဟုတ်ဘဲ သွားလာရေးကဏ္ဍ စီမံခန့်ခွဲမှု အားနည်းဖြစ်ရတာတွေ များတယ်၊ အာဆီယံဒေသအနေနဲ့ ကြည့်မယ်ဆိုရင် မြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့ ယာဉ်အစီးရေက ဘာမှ မပြောပလောက်သေးဘူး”ဟု ‘မြန်မာနိုင်ငံ အင်ဂျင်နီယာအသင်း’မှ တာဝန်ရှိ သူတစ်ဦးက ဆိုသည်။
ယာဉ်ကြောကျပ်တည်းမှုများအား ဖြေရှင်းရန်အတွက် ယာဉ်ကြောပိတ်ဆို့သည့် နေရာများတွင် လမ်းရှင်းလင်းခြင်း၊ ယာဉ်ရပ်နားရန် နေရာများ ချဲ့ထွင်ခြင်း လုပ်ငန်းများ ဆောင် ရွက်လျက်ရှိပြီး မြေနေရာရရှိပါက ယာဉ်ရပ်နားကွင်းများပါ ထပ်မံတည်ဆောက်ရန် စီစဉ်လျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။
လက်ရှိ မြန်မာနိုင်ငံတွင် မှတ်ပုံတင်ထားရှိသည့် မော်တော်ယာဉ် အစီးရေ လေးသိန်းသုံးသောင်းကျော် ရှိပြီး တစ်နိုင်ငံလုံး၏ယာဉ်
အစီးရေ ထက်ဝက်ကျော်မှာ ရန်ကုန်မြို့တွင် ရှိကြောင်း သိရသည်။
10:42:00 PM Myanmar Newsupdates2comments
10:40:00 PM Myanmar Newsupdates No comments
ကမ္ဘာကျော် ရုပ်သံဇာတ်လမ်းတွဲ Prison Break မှာ အဓိကသရုပ်ဆောင် မိုက်ကယ်လ်စကိုးဖီးလ်အဖြစ် သရုပ်ဆောင်ပြီး နာမည်ကျော်ခဲ့တဲ့ ဝမ့်ဝေါ့သ်မေလာက သူဟာ လိင်တူချစ်သူတစ်ဦး ဖြစ်တယ်လို့ ထုတ်ဖော် ပြောကြားခဲ့ကြောင်း Reuters သတင်းဌာနမှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။
ဗိုလ်ချုပ်၏ စိတ်ရင်းမူကို သဘောထားသင့်ကြောင်း ဆရာတော် အရှင်ဆန္ဒာဓိက မိန့်
10:40:00 PM Myanmar News Updates No comments
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၏ လက်ရေး မူကို မြတ်နိုးသကဲ့သို့ စိတ်ရင်းမူကိုလည်း တန်ဖိုးထားသင့်ကြောင်း ဆရာတော် အရှင်ဆန္ဒာဓိက က မိန့်ကြားလိုက်သည်။
သြဂုတ်လ ၁၆ ရက်နေ့က နေပြည် တော်အမျိုးသားလွှတ်တော် ခန်းမဆောင်၌ ရေနံချောင်းမြို့မိမြို့ဖများ လက်သို့ အမျိုးသားလွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးခင်အောင်မြင့်မှ ပြန်လည်ပေးအပ် သော ဗိုလ်ချုပ်လက်ရေးမူ စာအုပ်ကို ရေနံချောင်းမြို့မှသွားရောက်စောင့်ဆိုင်းကြိုဆိုသော ဆရာတော်က အထက်ပါအတိုင်း မိန့်ကြား ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
''ရပ်ဝေးကို အပြီးလိုလို ထွက်ခွာသွားတဲ့ ကိုယ့်အဘိုး မမျှော်လင့်ဘဲ အိမ်ပြန်ရောက်လာတာကို မြေးတစ် ယောက်အနေနဲ့ ဝမ်းမြောက်စွာသွားကြိုတာပါ။ ဒီစာအုပ်လေး ပြန်ပေးတဲ့အတွက် အမျိုးသားလွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌ ဒကာကြီး ဦးခင်အောင်မြင့်ကို လှိုက်လှဲစွာကျေးဇူး အထူးတင်ရှိသလို မြို့သူမြို့သားတွေရဲ့ ဆန္ဒကို အလေးအနက်ထားတဲ့ စိတ်ဓာတ်ကိုလည်း လေးစားစွာ ချီးကျူးဂုဏ်ပြုပါတယ်''ဟု ဆရာတော် အရှင်ဆန္ဒာ ဓိက က မိန့်ကြားသည်။
လက်ရေးမူစာအုပ်၏ သမိုင်း ကြောင်းအမှန်နှင့် ပတ်သက်၍ လက်တွေ့ သိမီလိုက်သူများကို စုံစမ်းမေး မြန်းထားသော ဆရာတော်က ''ဒီစာ အုပ်ကို ဦးဖိုးခက်တို့၊ ဦးဘဖေတို့က လှူထားတာမဟုတ်ပါဘူး။ ရေနံချောင်း အထက(၁) ရဲ့ ကျောင်းအုပ်ဆရာကြီး ဦးကြည်စိန်က လှူထားတာပါ။ ဦးကြည်စိန်ရဲ့ လက်ထဲကို ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ဆီကပဲ တိုက်ရိုက်ရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဦးကြည်စိန်နဲ့ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းက ငယ်သူငယ်ချင်း အရင်းခေါက်ခေါက် တွေပါ။ သူတို့ယူတဲ့ မေဂျာ ဘာသာရပ်မှာ ဗိုလ်ချုပ်နဲ့ ဦးကြည်စိန် နှစ်ယောက်တည်းပဲရှိတဲ့အတွက် တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် မှတ်စုစာအုပ် အပြန်အလှန် ငှားဖြစ်ခဲ့ကြ ပါတယ်။ ဒီစာအုပ်က ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းဆီက ဦးကြည်စိန် ငှားထားပြီး ပြန်မပေးဖြစ်တော့တဲ့ စာအုပ်ပါ။ နောက်ပိုင်း ခဏခဏပြန်တွေ့ ကြပေမယ့် ဗိုလ်ချုပ်က ပြန်မတောင်း ဘူး ဆိုတော့ ဦးကြည်စိန်ကို အပိုင်ပေး လိုက်တဲ့သဘောပဲပေါ့။ ၁၉၆၂ ရေနံ ချောင်း အထက(၁)မှာပညာရေးပွဲတော် ကျင်းပတော့ ဘာသာရပ် အလိုက် ပြခန်းတွေ ပြသကြတဲ့အခါ သမိုင်းပြခန်းမှာ ဒီစာအုပ်လေးကို သမိုင်းဝင်စာအုပ်အဖြစ် ကျောင်းသူ ကျောင်းသားတွေနဲ့ မြို့သူမြို့သားတွေကို တရားဝင်စတင် ပြသခဲ့ပါတယ်။ ပြပွဲပြီးတော့ အိမ်ပြန်မယူတော့ဖို့ ဆရာ၊ ဆရာမတွေက မေတ္တာရပ်ခံတဲ့အတွက် ကျောင်းစာကြည့်တိုက်မှာပဲ ဆရာကြီး ဦးကြည်စိန်က အပြီးအပိုင် လှူဒါန်းထားလိုက်တာပါ။ နဂိုက ဘီရိုထဲမှာပဲ တခြားစာအုပ်တွေနဲ့ ရောထားပေမယ့် ၁၉၆၇-၁၉၆၈ မှာ ဆရာမကြီး ဒေါ်ခင်မြင့်က ရေရှည်တည် တံ့ဖို့အတွက် အခုမြင်တွေ့နေရတဲ့ မှန် သေတ္တာပုံးလေး လုပ်ပြီး သီးသန့် ထိန်း သိမ်းထားခဲ့ပါတယ်။ ဆရာကြီး ဦးကြည် စိန်အိမ်မှာနှစ်ပေါင်း ၃ဝ၊ အထက (၁) မှာ နှစ်ပေါင်း ၅ဝဆိုတော့ဒီစာအုပ် လေး ကို ရေနံချောင်းမြို့ကနှစ်ပေါင်း ၈ဝကျော် အမြတ်တနိုး ထိန်းသိမ်းစောင့် ရှောက်လာခဲ့ရတာပါ'' ဟု ရှင်းလင်းမိန့်ကြား သည်။
နိုင်ငံတော်၏ ကူညီမှုဖြင့် ရေနံ ချောင်းမြို့တွင်သာ ဤစာအုပ်ကို စနစ် တကျ ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းခွင့်ရပါက ရေနံချောင်းမြို့ရှိ ဗိုလ်ချုပ်နှင့် ရင်းနှီးခဲ့ သော မိသားစုအသီးသီး၌ ထိန်းသိမ်း ထားသော ဗိုလ်ချုပ်၏ အခြား လက်ရေးမူများ၊ ဗိုလ်ချုပ်ဇနီး ဒေါ်ခင်ကြည်၏ လက်ရေးမူများကို ပိုင်ရှင်အသီးသီးက ဆရာတော်၏ လက်သို့ လွှဲပြောင်းလှူ ဒါန်းသွားကြရန် ဆန္ဒရှိနေကြကြောင်း ကြားသိရသည်။
စာအုပ်ပြန်ရ၍ ဝမ်းသာနေကြ သော မြို့သူမြို့သားများကို ဆရာတော် က ''ဗိုလ်ချုပ်ရဲ့ လက်ရေးမူကို မြတ်နိုး ထိန်းသိမ်းနေရုံနဲ့ ကျေနပ်မနေဘဲ ဗိုလ် ချုပ်ရဲ့ စိတ်ရင်းမူကိုလည်း တန်ဖိုးထား ကျင့်သုံးသင့်ပါတယ်။ ရိုးသားဖြောင့် မတ်ခြင်း၊ သနားကြင်နာခြင်း၊ ရဲစွမ်း သတ္တိရှိခြင်း၊ စွန့်လွှတ်အနစ်နာခံခြင်း၊ မလိမ်မညာခြင်း၊ အခွင့်အရေးမယူခြင်း၊ ဥာဏ်ပညာထက်မြက်ခြင်း၊ လုံ့လဝီရိယ ကြီးမားခြင်းစတဲ့ စိတ်ကောင်း စိတ်မြတ်၊ ဓာတ်ကောင်းဓာတ်မြတ်တွေဟာ ဗိုလ် ချုပ်ရဲ့ စိတ်ရင်းမူပါပဲ'' ဟု ရှင်းပြခဲ့သည်။
ဗိုလ်ချုပ်၏ စိတ်ဓာတ်နှင့် လုပ်ရပ်များကို အတုယူကျင့်သုံးနိုင်ရေးအတွက် ဗိုလ်ချုပ်အကြောင်း များများသိ အောင် လေ့လာဖတ်ရှုကြရန်ရေနံချောင်းမြို့၊ အလင်းစေတမန်စာကြည့်တိုက်နှင့် အထက (၁) စာကြည့်တိုက် တို့သို့ ဆရာ တော်က ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနှင့် ပတ် သက်သော စာအုပ်အမျိုးအစား ၇ဝ ကျော်စီ နှစ်စုံ လှူဒါန်းခဲ့သည်။ ဆရာတော်သည် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ပညာသင်ကြားခဲ့ရာ အမျိုးသားအထက်တန်း ကျောင်း 'ယခု အမက (၈)' သို့ လည်း သွားရောက်လေ့လာခဲ့ပြီး ယင်းကျောင်းကို မူလတန်းအဆင့်မှ အထက် တန်းအဆင့် သို့မဟုတ် အလယ်တန်း အဆင့်သို့ တိုးမြှင့်ဖွင့်လှစ်နိုင်ရန် နိုင်ငံတော်သို့မေတ္တာရပ်ခံ အကူအညီ တောင်းသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
10:30:00 PM Myanmar Newsupdates No comments
BeyondTrust လုံခြုံရေး ကုမ္ပဏီ နည်းပညာ အရာရှိ မာ့စ်မိုက်ဖရက်က ထိုသို့ စွမ်းဆောင်နိုင်သည့် ရှာရီသာကို ဆုငွေ ချီးမြှင့်ရန် Facebook ကို တိုက်တွန်းသော်လည်း ငြင်းဆန်ခဲ့သဖြင့် အွန်လိုင်း လှုပ်ရှားမှု တစ်ခု အနေဖြင့် စည်းရုံး လုပ်ဆောင်ခဲ့ရာတွင် တစ်နေ့တည်း ဒေါ်လာ ၁၀,၀၀၀ ရရှိခဲ့သည်။ လက်ရှိ အခြေအနေတွင် အလှူရှင်ပေါင်း ၁၉၉ ဦးထံမှ ရှာရီသာ အား ချီးမြှင့်ရန် ငွေသားပေါင်း ၁၁,၃၀၅ ဒေါ်လာ ရရှိနေပြီဖြစ်ကြောင်း GoFundMe အဖွဲ့က ထုတ်ပြန် ကြေညာခဲ့သည်။
နိုင်ငံတကာ ခိုးဝင်နေကြတဲ့ မွတ်စလင်တွေအတွက် ဘန်ကောက်ပို့ စ် အယ်ဒီတာ အာဘော်
Turkey would rather avoid questions when asked about the government's harshtreatment of its critics and Kurdish political activists.,
ရိုဟင်ဂျာပြဿနာကို မွတ်စလင်ကမ္ဘာမှာ ပို၍ အာရုံစူးစိုက်မှုရလာစေရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြိး Ahmet Davutoglu ကို ရခိုင်ဒေသကို စေလွှတ်ခဲ့သော တူရကီနိုင်ငံဟာ ကဒ်လူမျိုး နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားသူများအပေါ် ပြင်းပြင်းထန်ထန် ကိုင်တွယ်မှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး မေးမြန်းလာလျင် အမြဲ ရှောင်ရှားလေ့ရှိပါတယ်။
Indonesia dissembles when asked about discrimination against its Christian minority.
ရိုဟင်ဂျာ ပြဿနာကို ငြိမ်းချမ်းစွာ ကိုင်တွယ်ပါလို့ မြန်မာအစိုးရကို တိုက်တွန်းနေတယ့် အင်ဒိုနီးရှားအစိုးရဟာ သူ့ နိုင်ငံအတွင်းက လူနည်းစု ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်အပေါ် ခွဲခြား ဖိနှိပ် ဆက်ဆံတယ့်အကြောင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး မေးလာခဲ့ရင် အမြဲဖုံးကွယ် လိမ်ညာလေ့ ရှိပါတယ်။
Saudi Arabia would rather not talk about women's rights at home
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ရိုဟင်ဂျာတွေဟာ ethnic cleansing လူမျိုးတုန်းသတ်ဖြတ်ခံနေရပါပြီလို့ အော်ခဲ့သော ဆော်ဒီအာရေ ဗျဟာ သူ့ တိုင်းပြည်မှာ အမျိုးသမီးအခွင့်အရေးအကြောင်းကို
while Iran continues to speak out against intervention in Syria despite mass killings by the Assad regime.
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ရိုဟင်ဂျာများ အစုလိုက် အပြုံလိုက်
"genocide" သတ်ခံနေရပါတယ် ၊ နိုင်ငံတကာ နှင့်ကုလသမဂ္ဂတပ်များ စေလွှတ်ပြီး ကြားဝင် ထိန်းသိမ်းဖို့ လိုအပ်ပါတယ်လို့ တောင်းဆိုခဲ့တယ့် အီရန်အစိုးရဟာ အာဏာရှင် ဆီးရီယားသမ္မတ
အာဆတ် အတိုက်အခံသူပုန်အမြောက်အမြားကိုသတ်ဖြတ်နေခြင်းအပေါ် ကုလသမဂ္ဂမှ ကြားဝင်ထိန်းသိမ်းပေးဖို့ ကိုတော့ အမြဲ ကန့် ကွက်နေပါတယ်။
But all these countries agree that the Muslim Rohingya deserve basic human rights and better treatment from the Myanmar authorities.
ဒါပေမယ့် အဲဒီနိုင်ငံတွေအားလုံးဟာ မွတ်စလင် ရိုဟင်ဂျာတွေဟာ အခြေခံ လူ့ အခွင့်အရေးတွေ ရသင့်တယ်၊ မြန်မာအစိုးရက သူတို့ ကို ပိုပြီး ကောင်းကောင်းမွန်မွန် ဆက်ဆံသင့်တယ်လို့ 
သတင်းအပြည့်အစုံကို ဒီမှာ ဖတ်နိုင်ပါတယ်။
Facebook မှာ မယ်ပြိုင်ပွဲ ကျင်းပမယ့် သားစိုး
10:25:00 PM Myanmar Newsupdates No comments
ရောသမမွှေ သီချင်းတွေနဲ့ ပေါက်ခဲ့တဲ့ သားစိုးက အခုလည်း ထူးထူးခြားခြား လုပ်ချလိုက် ပြန်တာကတော့ facebook ပေါ်ကနေ Miss ပြိုင်ပွဲ လုပ်ဦးမယ် တဲ့။
သားစိုးရဲ့ စီးပွားရေးအလုပ်တခု ဖြစ်တဲ့ ရွှေပိုးနန်းတော် ပိုးထည်တိုက်ကနေ ၂ သောင်းကျပ်ဖိုးနဲ့ အထက် ဘယ်ပိုးထည်၊ ချည်ထည်မဆို ၀ယ်ယူပြီး မိမိ စိတ်ကြိုက် ဒီဇိုင်းတီထွင် ၀တ်ဆင်၊ အလှဓာတ်ပုံရိုက်၊ ပြီးရင် ရွှေပိုးနန်းတာ် facebook မှာ ၀င်ရောက် ယှဉ်ပြိုင်ရမှာပါ။
“Like အများဆုံး ရတဲ့သူကို facebook Award အဖြစ် ဆုငွေကျပ် ၅ သိန်း ချီးမြှင့်ပါမယ်။ နောက်ပြီး Miss ရွှေပိုးနန်းတော် ရွေးချယ်တဲ့အခါ Like အများဆုံးရရှိသူ Group A က ၅ ဦး၊ Group B က ၅ ဦး ထပ်ရွေးပြီး စက်တင်ဘာလ ၂၉ ရက်နေ့ Park Royal Hotel မှာပြုလုပ်မယ့် Fashion Show မှာ Title ဆုကို ၀င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ရမှာပါ” လို့ သားစိုးက ပြောပါတယ်။
Group A က အသက် ၃၀ အောက် ယှဉ်ပြိုင်ရမှာ ဖြစ်ပြီး ကျပ် ၅ သိန်းဆု တဆု၊ နှစ်သိမ့်ဆု နှစ်ဆု ပေးမှာ ဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ Group B ကတော့ အသက် ၃၀ အထက်တွေ ဝင်ရောက် ယှဉ်ပြိုင်နိုင်မှာ ဖြစ်ပြီး အဲဒီမှာက ကျပ် ၅ သိန်း ဆုတဆု၊ နှစ်သိမ့်ဆု နှစ်ဆု ချီးမြှင့်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Like အများဆုံး (People Award) ဆုက ဆုငွေကျပ် ၅ သိန်း ရမှာလို့လည်း သိရပါတယ်။
“ပိုးထည်ဝယ်ပြီးရင် လျှောက်လွှာကိုဖြည့်ပြီး ရွှေပိုးနန်းတော်က Original Voucher ကို လက်ဝယ် သိမ်းထားရမယ်၊ ဓာတ်ပုံကတော့ ကြိုက်တဲ့ ဓာတ်ပုံဆရာနဲ့ ရိုက်ပြီး ကိုယ်လုံးပေါ်ရှေ့ နှစ်ပုံ၊ နောက်ကျောတပုံကို CD နဲ့ ကျနော်တို့ ရွှေပိုးနန်းတော် ပိုးထည်တိုက်၊ ဒါမှမဟုတ် spntsilk@gmail.com ကို ပေးပို့နိုင်ပါတယ်” လို့ သားစိုးက ပြောပါတယ်။
ဓာတ်ပုံတွေကို စက်တင်ဘာ ၂၀ ရက်နေ့ နောက်ဆုံး ပေးပို့ရမှာဖြစ်ပြီး စက်တင်ဘာ ၂၁ ကနေ ၂၈ ရက်နေ့ည ၁၂ နာရီ အထိ Like အရေအတွက်ကို ယှဉ်ပြိုင်ရမယ်လို့ သိရပါတယ်။
“အသက် ၃၀ အထက်မှာ အိမ်ထောင်ရှင် အမျိုးသမီးတွေ ပါဝင် ယှဉ်ပြိုင်နိုင်ပါတယ်။ ဆုရတဲ့ သူတွေကတော့ ရွှေပိုးနန်းတော် ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေမှာ သက်တမ်းတနှစ် ပါဝင်မယ်လို့ လက်မှတ်ရေးထိုးရမှာပါ” လို့ သားစိုးက ဆိုပါတယ်။
အသေးစိတ် သိလိုတဲ့သူတွေကတော့ အမှတ် ၈ (စီ) မိုးကောင်းလမ်းမကြီး မှတ်တမ်းရုံးရှေ့ ဘောက်ထော်၊ ရန်ကင်းမြို့နယ်၊ ဖုန်း ၀၉၇၃၁၂၆၂၈၁ နဲ့ ၀၉၄၉၃၁၀၄၄၄ တို့ကို ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
သားစိုးတယောက် ရောသမမွှေကို ထူးထူးခြားခြား ပေါက်သွားအောင် လုပ်နိုင်ခဲ့သလို၊ အခုလည်း အာလူး၊ နှာဘူး၊ ဂန်ဒူး ဆိုတဲ့တေးစီရီး တခွေ လုပ်နေပြန်ပါပြီ။ သူ့ရဲ့ ရွှေပိုးနန်းတော် ပိုးထည်ဆိုင် ကိုကော ဘယ်လို ထူးထူးခြားခြား ပုံစံနဲ့ လူစိတ်ဝင်စားအောင်၊ ပေါက်သွားအောင် လုပ်မလဲဆိုတာ သိချင်သူတွေ စောင့်ကြည့်ဖို့တော့ လိုပါလိမ့်မယ်။
10:24:00 PM Myanmar Newsupdates No comments
Friday, 23, August, 2013
အလွမ်းသင့်ပန်းချီ တေးသီချင်းဖြင့် လူသိများလာသော ရတနာမိုင်၏ တတိယမြောက် တစ်ကိုယ်တော် တေးစီးရီးဖြစ်သော ပုံရိပ်များ တေးစီးရီးကို ရတနာမြိုင် တေးသံသွင်းမှ သြဂုတ်လ ၂၉ ရက်နေ့ တွင် ဖြန့်ချိသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း MyLay Entertainment မှ စီစဉ်သူ ဦးဇော်မျိုးထက်က ပြောကြားသည်။
“အရင်တုန်းက မိုင်လေးထွက်ခဲ့တဲ့ စီးရီးတွေမှာ ပါတဲ့သီချင်းတွေက ယောက်ျားလေးဆန်တဲ့ သီချင်းတွေများတယ်။ ဒီစီးရီးမှာတော့ မိန်းကလေးဆန်တဲ့ Slow Rock ပုံစံသီချင်းလေးတွေ ပိုထည့်ထားတယ်” ဟု ပုံရိပ်များ တေးစီးရီးနှင့် ပတ်သက်၍ ၎င်းကထပ်လောင်း ပြောကြားသည်။
ယခုတေးစီးရီးတွင် သီချင်းပေါင်း ၁၂ ပုဒ်ပါဝင်ကာ Bonus Track အနေနှင့် အဝေးထွက်သွားသူ သီချင်းကို ပုံစံပြောင်း တီးထားပြီး မိခင်ဖြစ်သူမိုင်၏ မလွမ်းပို သီချင်းကိုလည်း မူရင်းပုံစံအတိုင်း ပြန်ဆိုထားကြောင်း၊ သီချင်းများကို တေးရေး ဦးမိုးမင်းဝင်း၊ နောင်နောင် (SF)၊ မင်းချစ်သူ၊ အောင်လ၊ ညီမင်းခိုင်၊ ထင်အောင်၊ ယုန်လေး၊ စိုးမိုးသန်း၊ will & smith, Ngar, KLC တို့ ရေးစပ်ပေးထားကြပြီး ကိုယ်ပိုင်သံစဉ် သီချင်းတွေချည်း ဖြစ်ကြောင်း တေးသံရှင် ရတနာမိုင်က ဆိုသည်။
တေးသံရှင် ရတနာမိုင်မှာ မရှိလို့မဖြစ်နှင့် ပဖဘဗမ တစ်ကိုယ်တော် တေးစီးရီးများ ထွက်ရှိထားသည်။
တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး မြိတ်ခရိုင်အတွင်းသို့ ရေကြောင်းမှ တစ်ဆင့် ဖောက်ခွဲရေးသမားသုံးဦး ရောက်လာမည်ဟူသည့် သတင်းကြောင့် မြိတ်ခရိုင်အတွင်းရှိ ကျေးရွာများအထိ လုံခြုံရေးအဆင့် မြှင့်တင်ထားကြောင်း သက်ဆိုင်ရာ တာဝန်ကျ ရဲအရာရှိများထံမှ သိရသည်။
မြိတ်ခရိုင် တနင်္သာရီမြို့တွင်လည်း နေ့ကင်း၊ ညကင်းများဖြင့် အလှည့်ကျ လုံခြုံရေး တိုးမြှင့်ထားပြီး ကျေးရွာများတွင်လည်း သက်ဆိုင်ရာ ရပ်မိရပ်ဖများနှင့် ပူးပေါင်းပြီး လုံခြုံရေး တိုးမြှင့်ထားကြောင်း တနင်္သာရီမြို့မှ ဌာနဆိုင်ရာ ဝန်ထမ်းတစ်ဦးက ပြောသည်။
အဆိုပါ သတင်းကြောင့် မြို့တွင်းမြို့ပြင် စောင့်ကြည့် စစ်ဆေးမှုများကို ဆက်တိုက်ပြုလုပ်နေရပြီး လုံခြုံရေးတာဝန် ဆောင်ရွက်ရမည့် ရက်အကန့်အသတ်ကို မပြောနိုင်သေးဟု မြိတ်မြို့အဝင်အထွက် စစ်ဆေးနေသည့် တာဝန်ကျ ရဲအရာရှိတစ်ဦးက ပြောသည်။
“ကောလာဟလ သတင်းတွေက အမျိုးမျိုး ထွက်နေတာပါပဲ” ဟု အထက်ပါ ရဲအရာရှိက ဆိုသည်။ အကြမ်းဖက် ဖောက်ခွဲရေးသမားများဟု သက်ဆိုင်ရာက ထုတ်ပြန်ထားသည့်သူ သုံးဦးအနက် တစ်ဦးမှာ ယခင် မြန်မာနိုင်ငံသားတစ်ဦးဖြစ်ပြီး ယခုထိုင်းနိုင်ငံသား တစ်ဦးအဖြစ် ခံယူသည့် မာမတ် (ခ)သိန်းအောင်ဖြစ်ကာ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ၁၂ နှစ်သားအထိ နေထိုင်ခဲ့ဖူးကြောင်း၊ မြန်မာ စကားကိုလည်း ကောင်းမွန်စွာ ပြောတတ်ကြောင်း ဖော်ပြသည်။
ဒုတိယမြောက် တစ်ဦးဖြစ်သည့် အာဇက်မှာ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံသားဖြစ်ပြီး မြန်မာစကားကိုလည်း ကောင်းစွာ ပြော ဆိုနိုင်ကြောင်း ဖော်ပြထားသည်။
တတိယတစ်ဦးဖြစ်သည့် ယူနွတ် (ခ) လှမြင့်မှာ ရခိုင်ပြည်နယ် ဇာတိတစ်ဦးဖြစ်ပြီး ယခု ထိုင်းနိုင်ငံသားတစ်ဦးအဖြစ် ခံယူထားကာ မြန်မာစကားကိုလည်း ကောင်းမွန်စွာ ပြောဆိုနိုင်သူ ဖြစ်သည်ဟု သက်ဆိုင်ရာက ဖြန့်ဝေထားသည့် ဓာတ်ပုံနှင့် စာအရ သိရသည်။
10:22:00 PM Myanmar News Updates No comments
ယနေ့ နေ့ လည်၂း၁၁မိနစ်ခန့်ကနေပြည်တော်အြ
မန်လမ်းမ မိုင်တိုင်အမှတ် ၁၅၇/၇မှာတောင်ပေါ်သားအဝေးပြေးကားကလမ်းပြုပြင်မှုပြုလုပ် နေတဲ့ မော်တော်ယာဉ်ကိုဝင်တိုက်ပြီးဘေးကမြောင်းထဲကို ထိုးကျခဲ့ပါတယ်။
၂၈ဦးခန့်ပါပါတယ်။ယာဉ်တိုက်မှုကြောင့်ခရီးသည်တစ်ဦးတစ်ယောက်မှ ဒဏ်ရာအပြင်းအထန်ရခြင်းမရှိဘဲ ယာဉ်မောင်းနှစ်ဦးအနက် တစ်ဦးမှာ ခြေထောက်နဲ့ လက်များပွန်းပဲ့ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်။
"ရှေ့ကကားသေးလေးကိုကျော်တက်ခိုင်းတာအဲဒါကိုကားသေးလေးကမတက်တော့သူကတက်တော့အရှိန်မထိန်းနိုင်တော့ဘူးလမ်းပြင်နေတဲ့ သူတွေ ထိမှာစိုးလို့လမ်းဘေးကိုဆွဲချလိုက်ပြီဆိုတာကိုတွေ့ တော့ ခေါင်းငုံ့ချလိုက်တာ၊ကြောက်တာတော့တော်တော်ကြောက်သွားတယ်"လို့ ကားပေါ်ပါလာသူအသက်သုံးဆယ်ဝန်းကျင်အမျိုးသမီးတဦးပြောပါတယ်။
KIA မှ အမည်စာရင်းကောက်ထားသော ဒေသခံလူငယ်များအား လူသစ်အဖြစ်ခေါ်ဆောင်မည်ဟု သတင်းများ ထွက်ပေါ်
10:18:00 PM Myanmar News Updates No comments
သြဂုတ်လ ၂၁ ရက် ၂၀၁၃
ကချင်ပြည်နယ် တနိုင်းမြို့နယ်အတွင်းရှိ ကျေးရွာအုပ်စုများ၌ ဇွန်လမှစ၍ အမည်စာရင်းကောက် ထားသော ဒေသခံ ကချင် လူငယ် များ အား လူသစ်အဖြစ် KIA အဖွဲ့မှ လာရောက်ခေါ်ဆောင်မည်ဟု သြဂုတ် ၁၉ ရက်နေ့ တွင်ယင်း မြို့နယ်၌ သတင်းများ ထွက်ပေါ် လျက်ရှိ သည်။
အဆိုပါကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ မြို့ခံဝန်ထမ်းတစ်ဦးက “အဲဒီလိုအမည် စာရင်း ကောက်ခိုင်းတာတော့ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်လလောက် ကတည်း က သိခဲ့တာပါ။ ပယင်းမှော်ထဲမှာ အမည်စာရင်းလာကောက်လို့ တစ်ချို့လူငယ်တွေ ပြန်ပြေးလာကြတာရှိတယ်။ အခုလည်း ကြားရပြန်ပြီ၊ လူငယ်တွေကိုပဲရွေးပြီး လူသစ်စုနေတာတော့ မဖြစ်သင့် တော့တဲ့ကိစ္စပဲလေ၊ ဒီလို ကိစ္စတွေဘယ်တော့ မှ ပျောက်မလဲ မသိပါဘူး” ဟု ပြောပြသည်။
“ဒီလကုန်ရင် အမည်စာရင်းကောက်ထားတဲ့ လူငယ်တွေကို ကချင် လွတ်မြောက်ရေးတပ်က လာခေါ်မယ်လို့ သိရပါတယ်။ လူသစ် လုပ်ရမယ်ဆိုတော့ ကလေးတွေလည်း ကြောက်နေကြတာပေါ့၊ သူတို့စိတ်ပါလို့ လုပ်ချင် တယ်ဆိုရင်တော့ ပြောစရာမရှိပါဘူး။ အခုလိုအလိုဆန္ဒမတူဘဲ အတင်းလူသစ်လုပ်ခိုင်းတာကတော့ မတရားဘူး ပေါ့။ ပြီးရင် ပြန်ပြေးလာကြတာပဲ၊ သူတို့ဘ၀တွေပဲ နစ်မွန်းတာလေ၊ အချို့ ဆိုရင် ကျောင်းတက်နေတဲ့ အရွယ်ပဲ ရှိသေးတာ” ဟု မိုင်းခွန်ရွာတွင် နေထိုင်သော အမည်စာရင်းပေးခံထား ရသည့် လူငယ်တစ်ဦး၏ ဖခင်ရွာသား တစ်ဦးက ပြောပြသွားသည်။
ကချင်လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်(KIA)မှ ယခုကဲ့သို့တနိုင်းမြို့နယ်အတွင်းရှိ ကျေးရွာအုပ်စုများ၌ ဒေသခံ လူငယ်များအား လူသစ်အဖြစ်သြဂုတ် လကုန်တွင် လာရောက်ခေါ်ဆောင်မည်ဟု သတင်းများထွက်ပေါ်နေ၍ ဒေသခံမိဘများမှာ စိတ်ထိခိုက်နေ ကြကြောင်း၊ ကျောင်းနေ အရွယ် အချို့လူငယ်များမျာ အခြားမြို့၊ ရွာများ၌ သွားရောက်ပညာ သင်ကြား နေရကြောင်း၊ လူသစ်အဖြစ် မလုပ်လိုသော ဒေသခံကချင်လူငယ်အချို့မှာ နေရပ် ကိုစွန့်ခွာကာ ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြပြီး ကြုံရာအလုပ်ကို လုပ်ကိုင်စားရမည့် အခြေအနေများနှင့် ရင်ဆိုင် နေကြရကြောင်း ဒေသခံတိုင်းရင်းသားများ၏ ပြောပြချက်အရ သိရှိရပါသည်။
ဆွာရက်ဇ်ကို ရီးရဲလ် အသင်း စိတ်ဝင်စားနေ
ရီးရဲလ် အသင်းသည် လီဗာပူး တိုက်စစ်မှူး ဆွာရက်ဇ်ကို စိတ်ဝင်စားနေပြီး ၎င်းတို့ တိုက်စစ်မှူး ဘန်ဇီမာသာ အာဆင်နယ်သို့ ရောက်သွားပါက ယင်းနေရာအတွက် ရီးရဲလ် အသင်းမှာ အဆိုပါ ဥရုဂွေး တိုက်စစ်မှူးကို မရမနေ ခေါ်ယူမည် ဖြစ်သည်။
လီဗာပူး အသင်းသည် ယခင် အတိုင်း ဆွာရက်ဇ်ကို ရောင်းချရန် စိတ်မ၀င်စားပေ။ လီဗာပူး အသင်းသည် အာဆင်နယ် အသင်း၏ စိတ်ဝင်စားခြင်းကို ငြင်းဆိုခဲ့ပြီး ဆွာရက်ဇ်မှာ လီဗာပူး အသင်းမှာ ဆက်နေမည်ဟု ဆိုခဲ့ကာ အသင်းပိုင်ရှင် ဂျွန်ဝီလျံ အွန်နရီကလည်း ဆွာရက်ဇ်ကို အသင်း အနေဖြင့် ရောင်းထုတ်မည် မဟုတ်ဟု ဆိုသည်။ အာဆင်နယ် အသင်းသည် ရီးရဲလ် အသင်းတွင် အနာဂတ် မရေရာသည့် တိုက်စစ်မှူး ဘန်ဇီမာကို ခေါ်ယူလိုကြောင်း သိရသည်။
ရီးရဲလ် အသင်းနှင့် ဆွာရက်ဇ် အခြေအနေ အပေါ် နည်းပြ ဘရန်ဒန်ရော်ဂျာက ယင်းအခြေအနေမှာ နောက်ဆုံး အချိန် အထိ အသက်ဝင်နေမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ ထို့အပြင် မိမိတို့လည်း အကောင်းဆုံး ဖြေရှင်းနိုင်ရန် ကြိုးစားရမည် ဖြစ်ပြီး ကစားသမားကောင်းများကို အသင်း အတွက် ခေါ်ယူနိုင်ရန်လည်း ဆောင်ရွက်နေကြောင်း၊ အကယ်၍ ဆွာရက်ဇ်ကို မိမိတို့ လက်လွှတ်ခဲ့ရမည် ဆိုပါက သူ့နေရာ အတွက် လုံလောက်သည့် အစားထိုးမှု ဖြစ်စေရန် အချိန် နည်းသွားမည် ဖြစ်ပြီး ၁၁ ရက်သာ ကျန်သည့် အချိန်ကာလမှာ မိမိတို့အတွက် လုပ်ရကိုင်ရ ခက်ခဲစေကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။
အလားတူ အန်ဇီမှ ၀ီလျံကို ခေါ်ယူရန် လက်လျှော့ ခဲ့ခြင်းမှာ ကစားသမား ကိုယ်တိုင်က မလာလို၍ ဖြစ်ပြီး မိမိတို့ အနေဖြင့် အသင်း အတွက် ကစားသမားကောင်းများကို ပစ်မှတ်ထားနေပြီး ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ သုံးစွဲကာ ခေါ်ယူနိုင်ရန် ဆောင်ရွက်နေကြောင်း လီဗာပူး နည်းပြ ဘရန်ဒန် ရော်ဂျာက ဆိုသည်။
Ref : http://www.yatanarpon.com.mm/
2:32:00 PM Myanmar Newsupdates No comments
“သတိ” အိမ်ထောင်ရှိသူများအတွက်သာရည်ရွယ်ပါသည်။ အသက် (၁၈) နှစ်အောက်
လုံးဝ လုံးဝ မဒေါင်းရ မကြည့်ရ
အပေါ်ကစည်းကမ်းကို မလိုက်နာရင် လူပျိုကြီး အပျိုကြီးဖြစ်ပါစေ :)
ဒီ APK လေးကိုပထမ မတင်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ထားတာ တောင်းဆိုတဲ့သူ ရှိနေလို့တင်လိုက်တာ
အင်တာနက်ချိပ်ထားရင် Update လုပ်ပေးတယ်
2:28:00 PM Myanmar Newsupdates No comments
ဖိုင်ဆိုဒ်တော့များတယ် 40MB တောင်နော်...
အောက်ပါလင့်အတိုင်း Download ဆွဲပါ။
1:50:00 PM Myanmar Newsupdates No comments
အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ ဂျကာတာမြို့တော်ရှိ မြန်မာသံရုံးကို ဗုံးခွဲရန် ကြံစည်မှုနှင့် ဆက်စပ် သံသယရှိသူ ၈ ဦးကို အင်ဒိုနီးရှား နိုင်ငံ အကြမ်းဖက်မှု နှိမ်နင်းရေး အထူးတပ်ဖွဲ့က ထပ်မံဖမ်ဆီးလိုက်ကြောင်း အင်ဒိုနီးရှားရဲတပ်ဖွဲ့က သြဂုတ်လ ၂၁ ရက်နေ့ တွင် ထုတ်ပြန် ပြောဆိုလိုက်သည်။
မြန်မာသံရုံး ဗုံးခွဲရန် ကြံစည်မှုနှင့် ဖမ်းဆီးခံရသူများထဲတွင် ယခင်က အကြမ်းဖက်မှုဖြင့် ပြစ်ဒဏ် ကျခံရဖူးသူ တဦးပါဝင်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံတွင် မွတ်စလင်များ အပေါ် ခွဲခြားဆက်ဆံမှု၊ သတ်ဖြတ်မှုများကို ဆန့်ကျင်သည့် အနေဖြင့်ထိုသို့ ကြံစည်ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း၊ မေလမှ စတင်ပြီး အင်ဒိုနီးရှား နိုင်ငံ မြို့တော် ဂျကာတာရှိ မြန်မာသံရုံးကို ဗုံးခွဲရန်ကြံစည်သူများကို အင်ဒိုနီးရှား အာဏာပိုင်များက ဖမ်းဆီး စစ်ဆေးမှုများပြုလုပ်ခဲ့ရာ လက်ရှိအချိန် ဗုံးခွဲရန် ကြံစည်မှုအတွက် သံသယရှိသူ စုစုပေါင်း ၁၄ ဦးကို ဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ကြောင်း အင်ဒိုနီးရှားမှ လာသော သတင်းများအရ သိရှိရသည်။
မြန်မာ သံရုံး ဗုံးခွဲရန် ကြံစည်မှုနှင့် ဖမ်းခံရသူများတွင် Iqbal Hussaini ဆိုသော အင်ဒိုနီးရှား အမျိုးသားတဦး လည်းပါဝင်ပြီး Iqbal Hussaini သည် သြဇာကြီးသည့် အလယ်အလတ် ၀ါဒီ မွတ်စဆလင်အမျိုးသား တဦးနှင့် ခရစ်ယာန် ကက်သလစ် ဘုန်းတော်ကြီး တဦးကို သတ်ဖြတ်ရန် ကြံစည်မှုဖြင့် ထောင်ဒဏ် ၈ နှစ် ချမှတ်ခံခဲ့ရကြောင်း၊ ၂၀၀၈ ခုနှစ်တွင် ပြန်လည် လွတ်မြောက်လာပြီး ယခုတဖန် ပြန်လည် ဖမ်းဆီးခံရခြင်း ဖြစ်ကြောင်း၊ Hussaini နှင့်အတူ အခြားသူ ၃ ဦး ကိုလည်း ဖမ်းဆီးခဲ့ပြီး အကြမ်းဖက်မှုနှင့် ဆက်နွှယ်ခြင်း ရှိ၊ မရှိ စစ်ဆေးမေးမြန်းနေကာ ဖမ်းဆီးခံရသူများနှင့်အတူ သေနတ် ၂ လက်၊ လေသေနတ် ၂ လက်နှင့် လက်နက် ခဲယမ်း တချို့ကို သိမ်းဆည်းရမိထားကြောင်း အင်ဒိုနီးရှား ရဲတပ်ဖွဲ့မှ ရဲမှူးကြီး Agus Rianto က ပြောသည်။
အလားတူ အကြမ်းဖက်မှုနှင့် ဆက်နွှယ်သည်ဟု သံသယရှိသူ တခြား စစ်သွေးကြွ ၄ ဦးကို ဂျကာတာမြို့ ဆင်ခြေဖုံးတွင် ဖမ်းမိခဲ့ပြီး ဖမ်းမိသူများထဲတွင် ၀ရမ်းပြေးတဦးဖြစ်သည့် Khoirul Ikhwan လည်း ပါဝင်ကြောင်း၊ ၎င်းတို့နှင့်အတူ ပစ္စတို ၂လက်၊ ကျည်ကတ် ၃ ခုနှင့် ကျည်ဆံ ၇၀ သိမ်းဆည်းမိခဲ့ကြောင်း၊ စစ်သွေးကြွ တဦးဖြစ်သူ Muhanmmed Zakaria ကို ဂျကာတာ အနောက်ပိုင်းတွင် သြဂုတ် ၁၈ ရက်နေ့က ဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့ကြောင်း အင်ဒိုနီးရှားရဲတပ်ဖွဲ့မှ ဒုတိယရဲမှူးကြီး Rikwanto က ပြောသည်။
“သူတို့က မြန်မာသံရုံးကို တိုက်ခိုက်ဖို့ ကြံစည်ခဲ့တဲ့ အဖွဲ့မှာ ပါဝင်သူတွေဆိုတာ ကျနော်တို့မှာ ခိုင်မာတဲ့ အထောက် အထားတွေ ရှိပါတယ်” ဟု ဒုရဲမှူးကြီး Rikwanto က ဆိုသည်။
ဖမ်းဆီးရမိထားသော စစ်သွေးကြွများသည် အလယ်ဂျာဗားမှ Solo City ရှိ ခရစ်ယာန် ဘုရားကျောင်း တကျောင်းနှင့် အနောက်ဂျာဗားမှ Cirebon မြို့ရှိ ရဲတပ်ဖွဲ့ဌာနချုပ် အသေခံ ဗုံးခွဲ တိုက်ခိုက်မှု ၂ ခုတွင် ပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့ သူများ ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်။
အင်ဒိုနီးရှား နိုင်ငံ ဂျကာတာမြို့တွင် မေလအတွင်း မြန်မာသံရုံးဗုံးခွဲရန် လက်လုပ်ဗုံး ငါးလုံး သယ်ဆောင်လာသော စစ်သွေးကြွ ၂ ဦးကို ဖမ်းဆီးခဲ့ပြီး ၎င်းတို့၏ နေအိမ်တွင် ပေါက်ကွဲစေတတ်သည့် ပစ္စည်းများကို ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ကြောင်း၊ ယင်းနောက် အင်ဒိုနီးရှား အာဏာပိုင်များက စစ်သွေးကြွများကို ဆက်တိုက် ဖမ်းဆီးခဲ့ပြီး ယခုသြဂုတ်လ အစောပိုင်းက ဂျကာတာမြို့ရှိ ဗုဒ္ဓဘာသာ ဘာသာရေး အဆောက်အအုံ တခုကို စစ်သွေးကြွများက ဗုံးခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီး လူတဦး ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ၂၀၁၂ ခုနှစ်မှ စတင်၍ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များ နှင့် မွတ်စလင်များ အကြား လူမျိုးရေး၊ ဘာသာရေး ပဋိပက္ခများ ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး လူသေဆုံး ထိခိုက်မှုများ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည်။
ကမာရွတ်လှည်းတန်း၏ နေ့လယ်ခင်းက ရောင်စုံလူများဖြင့် စည်ကားနေသည်။ မိုးက အုံ့မှိုင်းနေရာမှ ရုတ်ချည်းဆိုသလို သည်းသည်း မည်းမည်း ရွာချလိုက်၏။
လှည်းတန်း ကားဂိတ်အနီး ပလက်ဖောင်းအစွန်းတွင် ကျုံ့ကျုံ့ကလေး ထိုင်နေသည့် အမယ်အိုသည် သူ့ဘေးလွယ်အိတ်ထဲမှ ပလတ်စတစ် အကြည်စခေါက် တခုနှင့် ပလတ်စတစ် ခေါင်းစွပ်ကို ထုတ်လိုက်သည်။ သူ၏ ငွေရောင် လှိုင်းထနေသော ဆံပင်များနှင့် ဆံထုံးကလေးကို အုပ်မိုးကာ ခေါင်းစွပ်ကို စွပ်ပြီးလျှင် ဖာရာထေးရာ ဗလပွနှင့် အ၀တ်အစားများ လုံခြုံစေရန် ပလတ်စတစ်ပိုင်းဖြင့် ခြုံလိုက်သည်။
မိုးနှင့်အတူ လေတချက်တချက် ဝှေ့လိုက်တိုင်း ခြုံထားသည့် ပလတ်စတစ်စလေး လွင့်ပါမသွားစေရန် အစ နှစ်ဘက်ကို ဆွဲစေ့ရသည်။ အဘွားအိုသည် သူ့ရှေ့တည့်တည့်တွင် ချထားသည့် ဒန်ခွက်ကလေးထဲသို့ တတောက်တောက် ကျနေသော မိုးရေစက်များကို ငေးကြည့်ခြင်း၊ နဘေးမှ ဖြတ်သွားဖြတ်လာ လူများကို မော့ကြည့်ခြင်းတို့ကို ပုံမှန်အလုပ်တခုလို ပြုလုပ်နေ လေသည်။ ဖြတ်သွားသူတို့၏ ဖိနပ်မှ ရွှံ့စက်များ သူ့ခန္ဓာကိုယ်ဆီသို့ လွင့်စင်လာခြင်းကို သူ သတိပင်မပြုမိသလို ထိုင်နေခြင်း ဖြစ်သည်။
အသက် ၇၈ နှစ် အရွယ်ရှိ ယင်းအမယ်အို ဒေါ်မိမိက “မော်လမြိုင်မှာ သားတယောက်ရှိပေမယ့် ချွေးမက မကြည်ဖြူဘူး။ သူများ မသဒ္ဓါရေစာ မစားချင်လို့ အဘွား သူတို့ဆီမှာ သွားမနေတာပါ။ အခုနေတဲ့ အိမ်မှာ တရက်ကို နေစရိတ် ၁ ထောင် ပေးရတယ်။ အဘွား နေမကောင်း ဖြစ်ရင်လည်း သူတို့ပြုစုပေးတယ်။ မိသားစုတွေလို ဖြစ်နေကြပြီလေ” ဟု သူ့ဘ၀ တစိတ်တပိုင်းနှင့် ခေတ္တခိုကိုးရာ နေရာအကြောင်းကို ဖွင့်ဟ ပြောဆိုသည်။
အဘွား ဒေါ်မိမိ၏ ခင်ပွန်းသည် သင်္ချိုင်းတွင် မြေတူးသည့် သုဘရာဇာ တဦးဖြစ်ပြီး လွန်ခဲ့သည့် ၁၃ နှစ်ခန့်က ကွယ်လွန် ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
“အဲဒီတုန်းက အဘွားတို့က ပဲခူးမှာနေတာ။ သူ တွင်းတတွင်း တူးရင် ၃၅၀ ရတယ်။ အဘွားက ၁ ပတ်တခါ ရန်ကုန်ကိုလာပြီး အလှူခံတယ်။ ၃ ထောင်လောက် စုမိရင် ပြန်သွားတယ်။ သူဆုံးသွားတော့ အဘွားတို့ နေခဲ့တဲ့ အိမ်လေးကို ရောင်းပြီး သူ့ကို သင်္ဂြိုဟ်ခဲ့တယ်” ဟု အဘွားဒေါ်မိမိက ဆိုသည်။
အဘွားဒေါ်မိမိသည် မော်လမြိုင်ဇာတိဖြစ်ပြီး ငယ်စဉ်က ၉ တန်းအထိ ကျောင်းနေဖူးသူ တဦးဖြစ်သည်။ သူ ၉ နှစ် သမီးအရွယ်တွင် ဆေးရုံသန့်ရှင်းရေး ၀န်ထမ်း မိခင်နှင့်လည်းကောင်း၊ ဆယ်ကျော်သက် အရွယ်တွင် ဆိုက်ကားနင်းသော ဖခင်နှင့်လည်းကောင်း အသီးသီး သေကွဲကွဲခဲ့ရပြီး မိဘမဲ့ မိန်းကလေးတဦး အဖြစ် နေထိုင်နေစဉ် မျှော်လင့်မထားဘဲ အရှက်နှင့် ရင်းရသည့် ဘ၀လမ်းကြမ်းများကို ဖြတ်သန်းခဲ့ရကြောင်း ပြောပြသည်။
“အဘွားငယ်ငယ်က ကြီးလာရင် ကျောင်းဆရာမ ဖြစ်ဖြစ်၊ သူနာပြုဖြစ်ဖြစ် လုပ်ချင်ခဲ့တယ်” ဟု သူက ဆိုသည်။
သူ၏ ပျိုရွယ်စဉ် ဘ၀များကို အသေးစိတ် ပြန်ပြောလိုဟန်မရှိသည့် အဘွားသည် စောင်းနေသည့် ပလက်ဖောင်းမျက်နှာပြင်မှ သူ့ထံသို့ စီးကျလာသည့် မိုးရေစီးကြောင်းများကို ထိုင်လျှက်ပင် ရှောင်လိုက်၊ တိမ်းလိုက် လုပ်နေလေသည်။
အဘွား ဒေါ်မိမိကဲ့သို့ပင် နောက် အဘွားအိုတစ်ဦးမှာ ဒေါ်တင်ရီဖြစ်သည်။ အသက် ၆၅ နှစ် စွန်းစွန်းရှိသည့် သူ့ကို ရန်ကုန် မြို့လယ်ခေါင် ဆူးလေ ရထားလမ်း ခုံးကျော်တံတားပေါ်တွင် ရှိုက်ကြီးတငင် ငိုကြွေးနေသော အနေအထားဖြင့် မြင်တွေ့ရခြင်း ဖြစ်သည်။ သူနှင့် မလှမ်းမကမ်းတွင် မြို့တော် စည်ပင်သာယာရေး ကော်မတီ ယူနီဖောင်းဝတ်ထားသူ တဦးက အသက် ၉ နှစ် ၀န်းကျင်အရွယ်ရှိ ကလေးငယ် တဦးအား လမ်းတဘက် ဆီသို့ ခေါ်ဆောင်သွားသည်ကို ကြည့်လျှက် တုန်ရီနေသော သူ့ကို တွေ့ရသည်။
“မြေးရယ်၊ အဘွားကို မဖမ်းပါနဲ့နော်။ အဘွား သူတောင်းစား မဟုတ်ပါဘူး။ အဘွားဒီမှာ မတောင်းတော့ဘူးနော်။ သွားတော့မယ်နော်” ဆိုသည့် စကားလုံးများကို နှုတ်မှ တတွတ်တွတ်ရွတ်ရင်း သူ့ရှေ့တွင် ရပ်နေသူကို တုန်ရင်လျှက်က တောင်းပန်နေသည်။ သူ့ အင်္ကျီ နွမ်းနွမ်းလေးဖြင့် မျက်ရည်များကို သုတ်လိုက်၊ နှုတ်မှ တတွတ်တွတ် တောင်းပန်လိုက်ဖြင့် ထိုနေရာမှ ထွက်သွားဟန် ပြင်နေသည့် ထိုအမယ်အို၏ လက်ထဲတွင် မုန့်အနည်းငယ်နှင့် ငှက်ပျောသီး ထည့်ထားသည့် ကြွပ်ကြွပ်အိတ်ထုတ် လေးကို ကိုင်ထားသည်။
အဘွားဒေါ်တင်ရီသည် အဘွားဒေါ်မိမိကဲ့သို့ ယာယီခိုလှုံရန်နေရာပင် မရှိသူဖြစ်သည်။ သူညအိပ်သည့်နေရာမှာ ရန်ကုန် ဘူတာကြီးဖြစ်သည်။
“ည ရထားစောင့်တဲ့ လူတွေနားမှာ အဘွားအိပ်တယ်။ မိန်းကလေး အဖော်ရှိမယ့်နေရာမျိုးကို အဘွားရွေးတယ်။ သူတို့ ကြားထဲမှာ အိပ်တော့ ခရီးသည်မှတ်ပြီး အဘွားကို လာမဖမ်းဘူး။ အဘွား ဒီလိုမနေချင်ဘူး။ အလုပ်လေး တခု လုပ်ချင်တယ်။ ထမင်းစားရရင် တော်ပါပြီ။ အဘွား အလုပ် လုပ်နိုင်ပါသေးတယ်” ဟု မှိုင်းမှုန်နေသော သူ့မျက်လုံးများဖြင့် ရန်ကုန် ဘူတာကြီး၏ စုလစ်မွန်းချွန် ခေါင်မိုးများကို လှမ်းငေးလျှက် ပြောသည်။
သားသမီး ကျောထောက်နောက်ခံ မရှိသည့်ကြားက အိမ်ထောင်ဘက် အဘိုးအို ဆုံးပါးသွားချိန်တွင် ရန်ကုန်တိုင်း ကျောက်တန်း မြို့နယ်ရှိ တဦးတည်းသော အစ်ကိုဖြစ်သူထံ ခိုလှုံနေခဲ့ရာမှ၊ အစ်ကိုက ထပ်မံ ဆုံးပါးသွားပြန်ရာ သူစိမ်းများကို ကရိကထ မပေးလိုသော အဘွားဒေါ်တင်ရီသည် လမ်းပေါ်သို့ ရောက်လာရခြင်း ဖြစ်သည်။
အမယ်အို ဒေါ်မိမိနှင့် အဘွားဒေါ်တင်ရီသည် မြန်မာနိုင်ငံရှိ ခိုကိုးရာမဲ့ သက်ကြီးရွယ်အို မြောက်များစွာ ရှိသည့်အနက်၊ မိမိ ၀မ်းရေးအတွက် ရန်ကုန်မြို့ရှိ လူစည်ကားရာ အရပ်များသို့ လှည့်လည်ကာ အလှူခံနေရသည့် သက်ကြီးရွယ်အို တချို့ပင်ဖြစ်သည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် သက်ကြီးရွယ်အိုနှင့် ပတ်သက်၍ တိကျသော စာရင်းဇယားများမရှိသလို၊ ခိုကိုးရာမဲ့ သက်ကြီးရွယ်အိုများ မည်မျှရှိနေသည်ကိုလည်း သတ်သတ်မှတ်မှတ် စစ်တမ်း ကောက်ယူထားခြင်း မရှိပေ။
အရေအတွက် အတိအကျ ပြရန်ခက်ခဲသော်လည်း ရန်ကုန်မြို့ရှိ လူစည်ကားရာ အရပ်များတွင် သက်ကြီးရွယ်အို အလှူခံများ တိုးပွားလာသည်ကို မြင်တွေ့ နေရသည်။
တချို့ သက်ကြီးရွယ်အိုများက စုံတွဲလိုက်ဖြစ်သည်။ အဘိုးအို လက်ကိုဆွဲကာ အဘွားက တရွေ့ရွေ့လိုက်ပါလျှက် အလှူခံ နေသည့် မြင် ကွင်းများကလည်း ရန်ကုန်တွင် မြင်တွေ့ရဖန် များလာသည်။
ထို အဘိုးအဘွားအိုများ ကဲ့သို့ ခိုကိုးရာမိသားစု အရင်းချာအရိပ်မှ ဝေးကွာနေပြီး အသက်ရှင် ရပ်တည် နေထိုင်နိုင်ရေးအတွက် နည်းမျိုးစုံဖြင့် ရွှေ့ပြောင်း ကျင်လည်နေရသည့် သက်ကြီးရွယ်အိုများ ရှိနေခြင်းသည် မြန်မာ့လူမှု အသိုက်အ၀န်း၏ ယဉ်ကျေးမှု စံနှုန်း လျော့ကျလာခြင်းလားဟု မေးခွန်းထုတ်နေသူများ ရှိနေသည်။
မြန်မာနိုင်ငံသည် မိဘက သားသမီးကို အရွယ်သုံးပါးစလုံး စောင့်ရှောက်ပေး သကဲ့သို့၊ သားသမီးကလည်း အသက်အရွယ် အိုမင်းလာသော မိဘများ၊ ဘိုးဘွားများကို ပြန်လည် စောင့်ရှောက်ပြုစုသော ဓလေ့ဖြင့် နေထိုင်လာကြသူများ ဖြစ်ရာ၊ ရန်ကုန် လမ်းမများ ထက်တွင် အနယ်နယ် အရပ်ရပ်မှ ရောက်လာသည့် ခိုကိုးရာမဲ့ သက်ကြီးရွယ်အိုများကို မြင်တွေ့လာရခြင်းက ကောင်းမွန်သော လက္ခဏာတရပ် မဟုတ်ဟု သုံးသပ်သူများလည်း ရှိသည်။
လွန်ခဲ့သည့် ၃ နှစ်ခန့်က ကြေးမုံ သတင်းစာတွင် ဖော်ပြခဲ့သော ကြော်ငြာတကွက်က ဖတ်ရှုမိသူများ၏ နှလုံးသားကို ဆွဲကိုင်လှုပ်ခါ ခဲ့ပြီး လူမှုကွန်ရက်များ ပေါ်တွင် ပြန့်နှံ့သွားခဲ့သည်။
“ဇနီးမောင်နှံ နှစ်ဦးစလုံးကို နေစရာပေး လက်ခံမည့် ညစောင့် လုံခြုံရေးဝန်ထမ်း လုပ်လိုပါသည်။ အငြိမ်းစား ကျောင်းဆရာနှင့် ဆရာမ” ဟု ဖော်ပြထားသည်။ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပတ် ထည့်ပေးထားသည်။ မန္တလေးမြို့မှ ထိုနိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းဟောင်း အဘိုးနှင့် အဘွားတို့ နှစ်ဦးသည် သူတို့လိုချင်သော အလုပ်ကိုရလေသလား၊ သူတို့အတွက် နေစရာလေး တခု ရလေသလား မသိရသော်လည်း ထိုစဉ်က ၎င်းတို့ ခိုကိုးရာမဲ့၊ နေစရာမဲ့ ဖြစ်နေသည်ဆိုသည့် အချက်မှာ အငြင်းပွားစရာ မရှိပေ။
တချို့ သက်ကြီးရွယ်အိုများမှာ ၀မ်းရေးအတွက် အလှူခံနေခြင်းများ ရှိသကဲ့သို့၊ တချို့မှာ တန်ဖိုးနည်းလှသော ပစ္စည်း အတိုအစကလေး များကို ရောင်းချကြသူများလည်း ရှိသည်။ တချို့က မိသားစုမရှိ၊ သားသမီး ဆွေမျိုးမောင်နှမ မရှိ၊ တချို့က သားသမီး ရှိသော်လည်း အားကိုးရန် မဖြစ်နိုင်သည့် အခါတွင် အဘွား ဒေါ်မိမိကဲ့သို့ ကိုယ့်မာန် ကိုယ်တင်းကာ သားသမီး အရိပ် မခိုလှုံလိုသူများလည်း ရှိလေသည်။
ရန်ကုန်မြို့ရှိ မြို့ပတ်ရထား များပေါ်တွင် တွယ်ချိတ်၊ နဖာကလော်၊ မြို့ပတ်ရထား လမ်းညွှန်စာအုပ်ငယ် စသည့် တန်ဖိုးနည်း အသုံး အဆောင်တချို့ကို နေ့စဉ် ရောင်းချနေသည့် အဘိုးအိုတဦးက “တနေ့ကို အဘိုးအတွက် ၃ ထောင်လောက် ကျန်တယ်။ အဘိုးသမီး အငယ်ဆုံးက ၁၀ တန်း ကျောင်းသူလေ။ သူ့ကျောင်းစရိတ်ကို အဘိုးက ထောက်ရတယ်။ အဘိုးအတွက် မနက်စာကိုတော့ သားအငယ်က ကျွေးတယ်။ နေ့လယ်နဲ့ ညစာကို အပြင်မှာ ၀ယ်စားတယ်။ သမီးက မလိမ်မာဘူး။ စာမကြိုးစားဘူး” ဟု သူ့ဘ၀ကို ညည်းတွား ပြောဆိုသည်။
မြန်မာ့ မီးရထားဋ္ဌာန၏ အောက်ခြေ ၀န်ထမ်းတဦးဖြစ်သူ သားအငယ်၏ ၀န်ထမ်း လိုင်းခန်းတွင် သူနှင့် သူ၏ သမီးငယ် နေထိုင်ခွင့်ရသဖြင့် နေစရိတ်ပူရန် မလိုကြောင်းလည်း သူက ရှင်းပြသည်။
အသက် ၇၀ ကျော် ဘိုးဘွားများအတွက် နေ့ပိုင်း စောင့်ရှောက်ရေး ဂေဟာ (Day Care Centre) တခုကို လာမည့် စက်တင်ဘာတွင် ကမ္ဘာအေး လူမှုဝန်ထမ်း ဦးစီးဋ္ဌာနရုံးချုပ်၌ စတင်ဖွင့်လှစ်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း လူမှုဝန်ထမ်း ဦးစီးဌာန သက်ကြီးရွယ်အို စောင့်ရှောက်ရေး လုပ်ငန်းဌာနခွဲမှ ညွှန်ကြားရေးမှူးက ပြောခဲ့သည်။
“အဓိကကတော့ သားသမီးတွေ အလုပ်သွားတဲ့အချိန် အိမ်မှာ အထီးကျန်ပြီး တယောက်တည်း ကျန်နေခဲ့ရတဲ့ ဘိုးဘွားတွေ၊ လူမှုရေးအရ စောင့်ရှောက်ဖို့ လိုနေတဲ့ ဘိုးဘွားတွေကို ဆင်းရဲချမ်းသာမရွေး လက်ခံသွားမယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဒီလိုလုပ်တာ
ပထမဆုံးပါ” ဟု ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးအောင်ကျော်မိုးက ရှင်းပြသည်။
မရမ်းကုန်မြို့နယ်တွင် ဖွင့်လှစ်မည့် အဆိုပါ Day Care Centre တွင် အဆိုပါ စင်တာနှင့် အနီးတ၀ိုက် မြို့နယ်များမှ ရပ်ကွက်များမှ စာရင်းရယူပြီး ဘိုးဘွား ၃၀ ကျော်ကို ရှေ့ပြေး အစီအစဉ်အဖြစ် စောင့်ရှောက် ပေးသွားမည်ဖြစ်ကာ နောက်ပိုင်းတွင် လူဦးရေတိုးချဲ့ လက်ခံသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ လာမည့် ၂၀၁၄ – ၁၅ ခုနှစ်တွင် မန္တလေးတိုင်းအတွင်း ဖွင့်လှစ်ရန် စီစဉ်ထားပြီး ပြည်နယ်နှင့်တိုင်း အားလုံးတွင် တိုးချဲ့ လုပ်ဆောင်သွားမည့် အစီအစဉ်များလည်း ရှိကြောင်း အထက်ပါ ပုဂ္ဂိုလ်ထံမှ သိရသည်။
ဘိုးဘွားများအတွက် Day Care Centre တွင် လမ်းဘေး၌ အလှူခံ စားသောက်နေသည့် ဘိုးဘွားများ၊ အိမ်ခြေယာမဲ့ ဘိုးဘွားများကို လက်ခံဦးမည် မဟုတ်ဘဲ အဆိုပါ ဘိုးဘွားများအား စည်းရုံးဆဲ အခြေအနေတွင်ပင် ရှိသေးကြောင်း၊ စည်းရုံးဖူးသည့် အတွေ့အကြုံများအရ အိမ်ခြေယာမဲ့ ဘိုးဘွားတချို့မှာ ဘိုးဘွားရိပ်သာများတွင် နေလိုသည့် ဆန္ဒ မရှိကြကြောင်း ဦးအောင်ကျော်မိုးက ဆိုသည်။
“တချို့ဘိုးဘွားတွေကို လိုက်ပြီးစည်းရုံးတယ်။ တချို့က ရိပ်သာမှာမနေချင်ဘူး။ တဖြည်းဖြည်းတော့ စည်းရုံးနေပါတယ်။ ကျနော်တို့မှာ ၀န်ထမ်းအင်အားက တိုင်းနဲ့ပြည်နယ် အဆင့်ပဲရှိတယ်။ ခရိုင်နဲ့ မြို့နယ်တွေမှာ မရှိဘူး။ လူအင်အား မလုံလောက်ဘူး။ အခုတော့ ၀န်ကြီးကို ဖွဲ့စည်းပုံတိုးချဲ့ဖို့ တင်ပြထားတယ်။ ဒါဆိုရင် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်လုပ်နိုင်မယ်” ဟု လူမှုဝန်ထမ်း ဦးစီးဌာန ရုံးချုပ်မှ ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးအောင်ကျော်မိုးက ခိုကိုးရာမဲ့ သက်ကြီးရွယ်အိုများနှင့် ပတ်သက်သည့် စောင့်ရှောက်မှု အစီအစဉ်ကို ပြောသည်။
ထို့အပြင် လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဋ္ဌာနနှင့် Help Age Internationalတို့ပူးပေါင်းကာ အထက်မြန်မာပြည်ရှိ ပြင်ဦးလွင်၊ အရာတော်နှင့် မလှိုင်မြို့ နယ်များရှိ ကျေးရွာ ၁၀၀ ကျော်၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးရှိ မြို့နယ်တချို့နှင့် ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီးအတွင်းရှိ တချို့ မြို့နယ်များတွင် ဘိုးဘွားများအတွက် အိမ်တိုင်ယာရောက် စောင့်ရှောက်ရေး စီမံချက်များကို ၂၀၀၄ ခုနှစ်မှ စတင်လုပ်ဆောင်ခဲ့ကြောင်း အထက်ပါပုဂ္ဂိုလ်က ဆက်လက်ပြောသည်။
လက်ရှိတွင် တနိုင်ငံလုံး၌ စေတနာ့ဝန်ထမ်း အဖွဲ့အစည်းများမှ တည်ထောင်သော သက်ကြီးရွယ်အို များအား စောင့်ရှောက်မှုပေးလျှက် ရှိသည့် ရိပ်သာပေါင်း ၇၀ ကျော်ရှိပြီး ဘိုးဘွားစုစုပေါင်း ၃၀၀၀ ကျော်ကို စောင့်ရှောက်ထားကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံ လူမှုဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာချထားရေး ၀န်ကြီးဋ္ဌာနမှ ထုတ်ပြန်ထားသော စာရင်းဇယားများ အရ သိရသည်။
တချို့ ဘိုးဘွားများမှာ မိသားစု ကျောထောက်နောက်ခံ မရှိ၊ ခိုကိုးရာ အသိုက်အမြုံမဲ့၊ စားဝတ်နေရေး ချို့တဲ့သည့် အခြေအနေ မျိုးဖြင့် ဘ၀ နေ၀င်ချိန်ကို ဖြတ်သန်း နေရသော်လည်း စားချိန်အိပ်ချိန်၊ ဘုရားဝတ်ပြုချိန်၊ နားချိန် စသဖြင့် အချိန် အကန့် အသတ်များ၊ စည်းမျဉ်းများ ရှိသည့် ဘိုးဘွားရိပ်သာ များတွင် ပြောင်းရွှေ့ နေထိုင်လိုစိတ် မရှိကြသည်ကို တွေ့ရကြောင်း Save The Age မှ ကိုရီးက ရှင်းပြသည်။
ခိုကိုးရာမဲ့ သက်ကြီးရွယ်အိုများအား ရာသက်ပန်စောင့်ရှောက်မှု အစီအစဉ်များကို ကိုယ်ထူကိုယ်ထ လုပ်ဆောင်နေသည့် Save The Age အဖွဲ့မှ တာဝန်ရှိသူတဦးဖြစ်သည့် ကိုရီးက “ဘိုးဘွားရိပ်သာတွေ ရှိတယ်။ ဒါပေမယ့် ရိပ်သာတွေမှာ စည်းမျဉ်း စည်းကမ်းတွေ၊ ထောက်ခံချက် တောင်းတာတွေ ရှိတယ်။ ချက်ချင်းသွားပို့လို့ လက်ခံနိုင်တဲ့ နေရာမျိုးတွေ ရှိသင့်တယ်။ ရိပ်သာလည်း မဟုတ်၊ အိမ်လည်း မဟုတ်တဲ့ ပုံစံမျိုးလေးတွေ လုပ်ပေးနိုင်ရင် ကောင်းမယ်။ ဘိုးဘွားရိပ်သာ တွေမှာလည်း စည်းမျဉ်း စည်းကမ်းတွေ လျှော့သင့်တယ်” ဟု ပြောသည်။
ရန်ကုန်မြို့ အနှံ့အပြားရှိ လမ်းမများထက်တွင် စားဝတ်နေရေးအတွက် အလှူခံနေသည့် သက်ကြီးရွယ်အို များအတွက် နိုင်ငံတော်တွင် ကောင်းမွန်၍ စနစ်ကျသော အစီအမံများ မရှိသည်ကိုလည်း အဘွားဒေါ်မိမိ၏ ပြောပြချက်အရ သိနိုင်သည်။
“အဘွားကို စည်ပင်ကဖမ်းပြီး မှော်ဘီ ၀ါးနက်ချောင်းကို ပို့ဖူးတယ်။ အဲဒီမှာ အဘွားလို လူတွေအများကြီးပဲ။ စားရသောက်ရ တာလည်း ဆားပါလို့ ငပိမပါ၊ ငပိပါလို့ ဆားမပါ၊ အိပ်ရတာကလည်း ခေါင်းအုံးရှိလို့ စောင်မရှိ၊ စောင်ရှိလို့ ခေါင်းအုံးမရှိ။ နေရတာ တော်တော်ဒုက္ခ ရောက်ပါတယ်။ အဘွားအခုလို နေရပေမယ့် အဘွားဝင်ငွေနဲ့ ၀ါဆိုသင်္ကန်းလည်း ကပ်နိုင်တယ်။ အဘွားကိုလှူတာထဲက သူများကိုလည်း အဘွားက ပြန်လှူတယ်” ဟု ဒေါ်မိမိက ပြောသည်။
ရန်ကုန်-ပြည်လမ်းမှ လမ်းတဘက်သို့ ဖဲ့ဆင်းသွားပြီး ၇ မိုင်ကျော်ခန့် ဝေးသည့် နေရာတွင် ရန်ကုန်မြို့ လမ်းမများပေါ်မှ ခေါ်ဆောင်လာသည့် အိမ်ခြေယာခြေမဲ့ မိသားစုများ၊ ခိုကိုးရာမဲ့ သက်ကြီးရွယ်အိုများကို ထားသည့် ၀ါးနက်ချောင်း စခန်းရှိပြီး ထိုစခန်းကို ရန်ကုန်မြို့တော် စည်ပင်သာယာရေး ကော်မတီနှင့် လူမှုဝန်ထမ်း ဦးစီးဌာနတို့ ပူးပေါင်း ဖွင့်လှစ်ထားခြင်း ဖြစ်သည်။
အစိုးရမဟုတ်သော ပြည်တွင်း အရပ်ဖက်လူ့အဖွဲ့အစည်း များက တာဝန်ယူ စောင့်ရှောက်ထားသည့် ရိပ်သာများ ရှိသော်လည်း အခက် အခဲများစွာရှိနေကြောင်း Save The Age မှ ကိုရီးက ပြောသည်။
“အစိုးရမှာလည်း လုပ်စရာတွေ အများကြီးပဲ။ အစိုးရချည်း အားကိုးနေမယ့်အစား လူတိုင်း၊ ရပ်ကွက်တိုင်း၊ မြို့နယ်တိုင်းမှာ တာဝန်ရှိပါတယ်။ သက်ကြီးရွယ်အိုတွေ ဒုက္ခရောက်တယ်ဆိုတာ ပတ်ဝန်းကျင်က မစောင့်ရှောက် တာကြောင့်လည်း ပါတယ်။ အခု သက်ကြီးရွယ်အို ကူညီပေးရေး လုပ်နေတဲ့လူတွေမှာ ပိုက်ဆံချမ်းသာတဲ့၊ ငွေကြေး တတ်နိုင်တဲ့ လူတွေ မပါလာဘူး။ အဲဒီလို လူတွေက ၀ိုင်းဝန်းထောက်ပံ့လိုက်ရင် အဆင်ပြေမယ်” ဟု သူက ဆက်လက်ပြောသည်။
ရန်ကုန်မြို့တွင် သက်ကြီးရွယ်အိုများကို စောင့်ရှောက်ပေးနေသည့် ပြည်တွင်း ကိုယ်ထူကိုယ်ထ အရပ်ဖက်လူ့အဖွဲ့အစည်း အနည်းငယ် သာရှိပြီး ၎င်းတို့မှာ သန်လျင် သဘာဝတရားရိပ်သာ၊ ဆည်းဆာရိပ် ဂိလာနယ ဘိုးဘွားများ ထိန်းသိမ်း စောင့်ရှောက်ရေး အဖွဲ့၊ မေတ္တာရိပ်နှင့် Save The Age သက်ကြီးရွယ်အို စောင့်ရှောက်ရေးနှင့် ထောက်ပံ့ရေး ပရဟိတ လူငယ်များအသင်းတို့ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
သန်လျင် သဘာဝတရားရိပ်သာသည် ခိုကိုးရာမဲ့ ဘိုးဘွား ၁ ထောင်ကျော်ကို စောင့်ရှောက် ပေးထားသည့် ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း တကျောင်း ဖြစ်သည်။ ဆည်းဆာရိပ် ဂိလာနယ ဘိုးဘွားများ ထိန်းသိမ်း စောင့်ရှောက်ရေး အဖွဲ့သည်လည်း သန်လျင် မြို့နယ်တွင်တည်ရှိပြီး အသက်အရွယ် အိုမင်း၍ ကျန်းမာရေး ချို့တဲ့ကာ ခိုကိုးရာမဲ့နေသော ဘိုးဘွားများအား မိသားစု ပုံစံဖြင့် ကြင်နာယုယမှု ပေးရန် ဆိုသည့် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ဖွင့်လှစ်ထားသည့် ရိပ်သာငယ် တခုဖြစ်သည်။ လတ်တလောတွင် အသက် ၇၀ နှင့်အထက် ဘိုးဘွား ၆၄ ဦးကို စောင့်ရှောက်ပေးလျှက် ရှိသည်။ သားသမီး ကျောထောက်နောက်ခံမရှိ၊ ဆင်းရဲ ချို့တဲ့ပြီး ခိုလှုံရာ ကင်းမဲ့နေသော ဘ၀နေ၀င်ချိန် ဂိလာန သက်ကြီး ရွယ်အိုများအတွက် မြန်မာ နိုင်ငံ၏ တခုတည်းသော ရိပ်သာဟု ဆိုနိုင်သည်။
စောင့်ရှောက်မှု ခံယူရန် လိုအပ်နေသည်ဟု စာရင်းပေးထားသည့် ခိုကိုးရာမဲ့ သက်ကြီးရွယ်အိုများ ထပ်တိုး လက်ခံနိုင်မည့် နေရာ အလုံအလောက် မရှိခြင်းက ဆည်းဆာရိပ်၏ အခက်အခဲ တခုဖြစ်ကြောင်းလည်း သိရသည်။
“တယောက် နေရာလွတ်မှ နောက်တယောက်ကို လက်ခံရတဲ့အတွက် နေရာမလွတ်ခင်မှာ တချို့ ဘိုးဘွားတွေက အဖိတ် အစဉ် ဖြစ်သွားကြပြီလေ။ အခု လောလောဆယ်မှာ ဒီကိုလာဖို့အတွက် စောင့်ဆိုင်းနေတဲ့ ဘိုးဘွားက အနည်းဆုံး ၂၀ ရှိတယ်” ဟု ဆည်းဆာရိပ် တည်ထောင်သူ တဦးဖြစ်သည့် စာရေးဆရာမ ဒေါ်သန်းမြင့်အောင်က ပြောသည်။
“အစိုးရပိုင်းကရော၊ လူမှုအဖွဲ့အစည်း တွေပါ ကိုယ့်နိုင်ငံထဲက သက်ကြီးရွယ်အိုတွေ၊ ကလေးသူငယ်တွေ အတွက် လုပ်ပေးဖို့ လိုအပ်တယ်။ တကယ့် မိသားစုတွေကလည်း မိဘတွေကို တကယ် စေတနာထားပြီး ရုပ်ပိုင်းရော၊ စိတ်ပိုင်း ဆိုင်ရာတွေကိုပါ ဂရုစိုက်ဖို့ လိုတယ်။ ကိုယ့်အလှည့်မှာ မိဘတွေကို ကရိကထတွေ ပေးခဲ့ပြီး ကိုယ့်အလှည့်ကျတော့ ပစ်ပယ်ချင် လာတာတွေ ရှိတယ်” ဟု ဒေါ်သန်းမြင့်အောင်က ဆက်လက်ပြောသည်။
တချို့က ငွေကြေး ကျပ်တည်းဆင်းရဲမှု၊ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု များကြောင့် မိဘများအား ပစ်ပယ်သဖြင့်၊ လမ်းမပေါ်သို့ ရောက်လာ ရသည့် သက်ကြီးရွယ်အို များသည် လူ့ဂုဏ်သိက္ခာ ကျဆင်းနေကြရရာ လူ့အဖွဲ့အစည်း တခုလုံးတွင် တာဝန်ရှိကြောင်း၊ အစိုးရနှင့် အကူအညီ ပေးရေး အဖွဲ့အစည်း များတွင်သာ တာဝန်ရှိခြင်း မဟုတ်ဘဲ၊ ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် မိသားစု အချင်းချင်း ကြားတွင်လည်း တာဝန်ရှိကြောင်း သူက ဆိုသည်။
“သားသမီးကိုယ်တိုင်က မိဘကို ရိပ်သာရှေ့လာချခဲ့တာမျိုး ရှိတယ်။ တလောက ကျီတော် လမ်းထောင့်မှာ လူရည်သန့် နှစ်ယောက်က ကားနဲ့လာပြီး အဘိုးတယောက်ကို ပစ်ထားတယ်ဆိုပြီး အကြောင်းကြားလို့ သွားခေါ်ရတယ်။ ရောက်စက စကား မပြောနိုင်ဘူး။ သေသေချာချာ ပြုစုပြီး နေပြန်ကောင်းလာတော့ စကားပြောတာ အင်္ဂလိပ်လိုပဲ ပြောတယ်။ ပညာတတ် တယောက်ပဲ။ သူငယ်စဉ်က သူများ အပေါ်မှာ ဆိုးခဲ့လို့ အများက ဒဏ်ခတ်တာလည်း ဖြစ်ကောင်း ဖြစ်နိုင်တယ်။ ဒါပေမယ့် ကျမ ပြောချင်တာကတော့ သူတို့တတွေဟာ ဘာမှ မလုပ်နိုင်တော့တဲ့ သက်ကြီးရွယ်အိုတွေ ဖြစ်နေကြပါပြီ။ အရင်က ဆိုးခဲ့တာတွေကို ပြန်ပြောမနေကြပါနဲ့တော့။ မျှားပစ်တဲ့သူကို မရှာကြပါနဲ့တော့။ မျှားဒဏ်ရာကိုပဲ ကုပေးကြဖို့ သင့်ပါတယ်” ဟု ဒေါ်သန်းမြင့်အောင်က အတွေ့အကြုံ တခုနှင့် နှိုင်းယှဉ်၍ ပြောပြသည်။
ထို့အပြင် ဘိုးဘွားရိပ်သာ အရေအတွက် များခြင်း၊ နည်းခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ “ပုဂ္ဂလိက ဘိုးဘွားရိပ်သာတွေ ဖွင့်ဖို့က အခက်အခဲ သိပ်မရှိတော့ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ဘိုးဘွားတွေကို စောင့်ရှောက်တဲ့ နေရာတွေ ရှိနေတာပဲ ဆိုပြီး တာဝန်မဲ့ သားသမီးတွေ ပေါ်မလာစေချင်ဘူး” ဟု သူက ဆိုသည်။
Save The Age သက်ကြီး ရွယ်အို စောင့်ရှောက်ရေးနှင့် ထောက်ပံ့ရေး ပရဟိတ လူငယ်အသင်းမှာ အင်တာနက် စာမျက်နှာများမှ တဆင့် တွေ့ရှိခင်မင်သည့် ၀ါသနာတူ လူငယ်များဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသော ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုး အဖွဲ့ငယ် တခုဖြစ်သည်။ ထိုအဖွဲ့သည် ရန်ကုန်မြို့ အနှံ့တွင် နေထိုင်သည့် မိသားစု ကျောထောက်နောက်ခံ မရှိသော အသက် ၆၅ နှစ်နှင့် အထက် ပစ်ပယ်ခံ ဘိုးဘွားများအား ကွင်းဆင်း လေ့လာကာ ရာသက်ပန် ထောက်ပံ့မှုပေးလျှက် ရှိပြီး လတ်တလော တွင် ဘိုးဘွား ၃၃ ဦးအား စောင့်ရှောက်ပေးလျှက် ရှိကြောင်း သိရသည်။
“ကလေးသူငယ်တွေ အတွက် လုပ်ပေးနေတဲ့ အဖွဲ့တွေ အများကြီး ရှိကြတယ်။ ဒါပေမယ့် သက်ကြီးရွယ်အိုတွေ အတွက် လုပ်ပေးမယ့်သူ ရှားတယ်။ ကျနော် သိသလောက် ပြည်ပ NGO တွေကလည်း သက်ကြီးရွယ်အို အတွက် လုပ်နေတာမရှိဘူး” ဟု ကိုရီးက ပြောသည်။
လမ်းပေါ်တွင် အလှူခံနေသည့် သက်ကြီးရွယ်အိုများ အနက် တချို့မှာ အမှန်တကယ် မိသားစုမဲ့၊ ခိုကိုးရာမဲ့ နေသူများ ဖြစ်သော်လည်း၊ တချို့မှာ သားသမီးများက မိဘများ၏ ၀င်ငွေကို အဆင်သင့် စားနေသူများလည်း ရှိနေပြန်သည်။ တချို့ ဘိုးဘွားများကို သူစိမ်းများက နေစရာပေး၊ စားစရာကျွေးကာ တနေ့တာ ၀င်ငွေများကို ပြန်အပ်ရသည့် အခြေအနေမျိုးလည်း ရှိသည်။ သက်ကြီးရွယ်အို လူကုန်ကူးခံရခြင်း တနည်းဟု ဆိုနိုင်သည်။
“လှိုင်မြို့နယ်ထဲက ရေမြောင်းတခုပေါ်မှာ အိမ်လေး ဆောက်ပြီး တယောက်တည်းနေတဲ့ အဘွားတယောက်ကို ကျနော်တို့ အဖွဲ့က သွားပြီး အိမ်ပြင်ပေးတယ်။ ရပ်ကွက်က လာကူညီပေးတဲ့ အစ်ကိုနှစ်ယောက်ကို ကျနော်တို့က ညနေကျတော့ မုန့်ဖိုးပေးတယ်။ နောက်နေ့ ထပ်သွားတော့ အဲဒီလူတွေ ကျနော်တို့ကို လာမကူညီတော့ဘူး။ ဘာကြောင့်လဲလို့ မေးတော့ အဲဒီ ရပ်ကွက်က ဆယ်အိမ်မှူးက မနေ့က မုန့်ဖိုးပေးတာမှာ သူ့အတွက် ဝေစု မပါလို့ အဲဒီလူ နှစ်ယောက်ကို သွားမကူညီရဘူး ဆိုပြီး ဖိအားပေးတယ်တဲ့” ဟု လူမှုပတ်ဝန်းကျင်၏ ပူးပေါင်းပါဝင်မှု လိုအပ်ချက်နှင့် ပတ်သက်၍ ၎င်း၏ အတွေ့အကြုံတခုကို ကိုရီးက ပြန်လည် ရှင်းပြသည်။
ပြီးခဲ့သည့် ဇူလိုင် ၁၁ ရက်နေ့က နေပြည်တော်၌ ပြုလုပ်ခဲ့သည့် ကမ္ဘာ့လူဦးရေနေ့ အခမ်းအနားတွင် ဒုတိယသမ္မတ ဒေါက်တာ စိုင်း မောက်ခမ်းက မြန်မာနိုင်ငံတွင် သက်ကြီးရွယ်အိုများ လျင်မြန်စွာ တိုးပွားလာခြင်းကြောင့် ကြုံတွေ့နိုင်သော စီးပွားရေးနှင့် လူမှုရေးဆိုင်ရာ အခက်အခဲများကို ဖြေရှင်းနိုင်ရန် ကြိုတင် ပြင်ဆင်ထားသင့်ကြောင်း၊ လာမည့် ၂ နှစ်အတွင်း မြန်မာနိုင်ငံ၏ လူဦးရေတွင် သက်ကြီးရွယ်အို ပါဝင်မှုနှုန်းမှာ ၁၀ ရာခိုင်နှုန်းအထိ တိုးမြင့်လာမည်ဟု ခန့်မှန်းထားကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။
မြန်မာနိုင်ငံသည် တခြားနိုင်ငံများကဲ့သို့ သက်ကြီးရွယ်အို အလွန်အမင်း များပြားသည့် ပြဿနာကို ရင်မဆိုင်ရ သေးသော်လည်း နောင် လာမည့် ဆယ်စုနှစ်များတွင် ယင်းပြဿနာကို ရင်ဆိုင်ရမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ တိုးပွားလာမည့် သက်ကြီးရွယ်အိုများ အားလုံး ဂုဏ်သိက္ခာ ရှိရှိနှင့် သွက်လက် ကျန်းမာပြီး လုံခြုံစိတ်ချ ရသော ဘဝမျိုးဖြင့် လျှောက်လှမ်း နိုင်မည့် အစီအစဉ်ကို လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနမှ သက်ကြီးရွယ်အိုများ အတွက် အဓိက လုပ်ငန်းစဉ် တရပ်အဖြစ် ဆောင်ရွက် လျှက်ရှိကြောင်း လူမှုဝန်ထမ်း ဦးစီးဋ္ဌာနက ထုတ်ပြန်ထားသည်။
ထို့အပြင် အနာဂတ် သက်ကြီးရွယ်အို စောင့်ရှောက်ရေး လုပ်ငန်းသည် သမားရိုးကျ ဘိုးဘွားရိပ်သာများ ထူထောင် စောင့်ရှောက်သည့် လုပ်ငန်းစနစ် တခုတည်းနှင့် လုံလောက်မှု မရှိသည့်အတွက် တခြား နည်းစနစ် များကိုလည်း ရှာဖွေ ဆောင်ရွက်လျှက် ရှိကြောင်း ဦးစီးဋ္ဌာန၏ ထုတ်ပြန်ချက်အရ သိရသည်။
မြန်မာနိုင်ငံသည် အာဆီယံ-ကိုရီးယား အိမ်တိုင်ရာရောက် သက်ကြီးရွယ်အို စောင့်ရှောက် ရေးအစီအစဉ်ကို ဆောင်ရွက်လျှက် ရှိပြီး မြန်မာနိုင်ငံ အပါအဝင် အာရှ-ပစိဖိတ် ဒေသတွင်း နိုင်ငံ ၂၈ နိုင်ငံမှ သက်ကြီးရွယ်အို စောင့်ရှောက်ရေး လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်နေသည့် ကိုယ်စားလှယ်များ၊ ကျွမ်းကျင် ပညာရှင်များ နှင့်သက်ကြီး ရွယ်အို စုစုပေါင်း ၁၂၀ ကျော် တက်ရောက် ခဲ့သည့် ညီလာခံတခုကိုလည်း ပြီးခဲ့သည့် မေလတွင် ရန်ကုန်မြို့၌ ကျင်းပ ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
ယင်းဆွေးနွေးပွဲတွင် ညီလာခံသို့ တက်ရောက် လာသော အာရှ-ပစိဖိတ် ဒေသတွင်း နိုင်ငံများ၏ သက်ကြီးရွယ်အို စောင့်ရှောက်ရေး ဆိုင်ရာ မူဝါဒများ၊ သက်ကြီးရွယ်အို စောင့်ရှောက်ရေးနှင့် ပတ်သက်သည့် အားသာချက်၊ အားနည်းချက် စသည့် အတွေ့အကြုံ များကို ဖလှယ်ခွင့် ရရှိခဲ့ကြောင်းလည်း လူမှုဝန်ထမ်း ဦးစီးဋ္ဌာနမှ သိရသည်။
ခြုံငုံကြည့်ရမည် ဆိုလျှင် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ခိုကိုးရာမဲ့ သက်ကြီးရွယ်အို စောင့်ရှောက်ရေး အစီအစဉ်များသည် လုံလောက်မှုမရှိ၊ စနစ်ကျမှုမရှိ သေးဘဲ အများ ပူးပေါင်းပါဝင်ရန် အရေး တကြီးလိုအပ်နေသည့် အနေအထားဖြစ်သည်။
မကြာတော့မည့် နှစ်ပိုင်းတွင် သက်ကြီးရွယ်အိုဦးရေ မြင့်မားလာမည့် အခြေအနေကို မလွှဲမသွေ ရင်ဆိုင်ကြရမည်ဖြစ်ရာ အဘွားဒေါ်မိမိနှင့် အဘွားဒေါ်တင်ရီကဲ့သို့ ခိုကိုးရာ ပျောက်ဆုံးနေသည့် ဘ၀နေ၀င်ချိန် အရွယ်များ မည်မျှ ထပ်ပေါ်လာ ဦးမည်ကို မသိနိုင်ပေ။
အဆိုတော် လင်းလင်း အကြောင်း အိတ်ဖွင့်ပေးစာ
1:07:00 PM Myanmar Newsupdates2comments
From : .. မန္တလေးသား
လင်းလင်းဆိုထားတဲ့သံမဏိလိပ်ပြာ တေးစီးရီးထဲက အိမ်မက်ထဲကစစ်သားကြီး ဆိုတဲ့ သီချင်းက
စစ်သားတွေကို စော်ကားထားတဲ့သီချင်းဆိုတာ ကျနော်လဲသူများပြောမှသိလို့ နားထောင်ကြည့်တယ်။
အရင်ကတော့ လင်းလင်းသီချင်းတွေ သိပ်နားမထောင်ဖြစ်ဘူး။
ဘာလို့ဆို အထင်မကြီးလို့ ။
ဘာလို့ အထင်မကြီးတာလဲဆိုရင် အကြောင်းသိတွေ ဖြစ်နေလို့ ပါ။
လင်းလင်းက စစ်သားတွေကို အမုန်းစာရင်းသွင်းနေတဲ့ သူဆိုလဲမမှားပါဘူး။ စစ်သားမှမဟုတ်ပါဘူး။
ရဲလဲ သူကကြည့်ရမှာမဟုတ်ဘူး။ ဘာလို့ လဲဆိုတော့ ရဲဆိုတာကလဲ
သူ့ ကိုဖဲဝိုင်းမိလို့ အချုပ်ထဲထည့်ခဲ့တာဆိုတော့ မုန်းမှာပေါ့။
အဆိုတော်မဖြစ်ခင် မန္တလေးက ၇၈လမ်း ၂၆လမ်းထောင့်က ရုံးကြီးထဲမှာ။
အဲ့တုန်းကတော့ အဲ့ဒီရုံးကြီးကပြောင်းခါစဆိုတော့ လူကသိပ်မရှိဘူး။ အဲ့ဒီမှာဖဲရိုက်တာ ရဲကသိသွားလို့ ဝင်ဖမ်းတော့ ပါသွားပါလေရော။
အဲ့တာနဲ့ မန္တလေး အမှတ်(၈)ရဲစခန်းကနေ အာမခံနဲ့ ပြန်ထွက်လာခဲ့ရတာ။
တိုသွားတယ်။သူတင်မဟုတ်သေးဘူး။ ညီအကို၎ယောက်စလုံးကလဲ လူဆိုးတွေ။သူ့ အကိုအကြီးဆို ခိုးမှုနဲ့ ထောင်တွေဘာတွေလဲကျဖူးတယ်။ အဲ့တုန်းကတော့ ဒါမျိုးအဆိုတော်ဘယ်ဖြစ်သေးမလဲ။
မန္တလေးကအဆောင်တွေရှေ့ မှာ ဂစ်တာလိုက်တီးရုံအဆင့်ပဲရှိသေးတယ်။
ဖအေဖြစ်သူက ကုလား၊မအေဖြစ်သူ မြန်မာ။ သူ့ ကိုစင်တင်ပေးလိုက်တာက ကိုလေးဖြူတို့ ။ နောက်ပိုင်းတော့လဲ မျိုးမစစ်တို့ ရဲ့ 
သဘောသဘာဝအရ အကျင့်မကောင်းတော့ ကန်ထုတ်ခံလိုက်ရတာပါပဲ။
အရင်ကချစ်သုဝေနဲ့ လဲ ဘာလိုလိုညာလိုလိုနဲ့ ၂ယောက်ပေါင်းပြီး လက်ဖက်ရည်ဆိုင်တောင်ဖွင့်လိုက်သေးတယ်။ အဲ့တုန်းက သူ့ အကိုကိုလဲ မန်နေဂျာအဖြစ်ခေါ်ပြီး ခန့် လိုက်သေးတယ်။ အခုတော့ဘာလို့ လဲတော့မသိ။သူ့ အကိုလဲ မန္တလေးပြန်ရောက်နေပြီ။စောတီး...ပြောချင်တာကတခြား၊ပြောမိတာကတခြား နဲနဲများသွားတယ်။
ပြောချင်တာကတော့ လင်းလင်းဘာဖြစ်လို့ အဲ့လိုသီချင်းစပ်ပြီးဆိုရတာလဲဆိုတာပါပဲ။ ပြည်သူတွေရဲ့ တပ်မတော်အဖွဲ့ အစည်းအပေါ်အမြင်လွဲနေတဲ့ အပေါ်ကို အခွင့်ကောင်းယူပြီး လုပ်တဲ့လုပ်ရပ်တစ်ခုလို့ ပဲမြင်တယ်။
လင်းလင်းက NLD ပါတီမှာလည်း ထဲထဲဝင်ဝင်ပါဝင်ပတ်သတ်နေသလို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ အရေးပေးမှုကိုလဲ ခံရသူလို့ သိရပါတယ်။ ဒါကြောင့် တပ်မတော်သားတွေကို ပြည်သူတွေ အထင်အမြင်လွဲအောင် ဖန်တီးခြင်းတစ်ရပ်လားလို့့လဲ တွေးစရာဖြစ်နေပါတယ်။
ဒါကြောင့် လင်းလင်းအခုလိုလုပ်လိုက်တဲ့ လုပ်ရပ်အတွက် တပ်မတော်နှင့် NLDမှ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့ ရင်ကြားစေ့ရေးဆောင်ရွက်နေတာကို ထိခိုက်သွားနိုင်တယ်ဆိုတာ မထင်မိဘူးလား။မတွေးမိဘူးလား။ လင်းလင်းအပေါ်ကိုလည်း အများအမြင်မှာ လင်းလင်းကိုချစ်တဲ့ ပရိတ်သတ် တွေရဲ့အားပေးမှုကို အခွင့်ကောင်းယူပြီး ဒီလိုတပ်မတော်နဲ့ ပြည်သူလက်တွဲဖို့ ကြိုးပမ်းနေတဲ့အချိန်မှာ အဟန့့် အတားတစ်ခုဖြစ်အောင်လုပ်လိုက်သလိုပါပဲ။ လင်းလင်းကိုအားပေးနေတဲ့ပရိတ်သတ်ထဲမှာ တပ်မတော်သားတွေလည်း ပါလိမ့်မည်လို့ ထင်ပါတယ်။
ဒီလိုအနေထားမှာ လင်းလင်းသီချင်းဟာသူတို့ တွေရဲ့ နှလုံးသားကိုနာကျင်စေလိမ့်မယ်လို့ ထင်တယ်။
NLDက ဒေါ်စုဘေးမှာ နေရာရချင်တာလေးတစ်ခုထဲနဲ့ ဒါမျိုးတစ်ဖက်နဲ့ တစ်ဖက်အမုန်းပွားစေမယ့်ကိစ္စမျိုးကို ဖန်တီးတာတော့မကောင်းပါဘူး။
လင်းလင်းအနေနဲ့ ဇေယျာသော်လိုပဲ လွှတ်တော်အမတ်ဖြစ်ချင်လို့ လား။ ဒေါ်စုရဲ့ အရေးပေးမှုကိုပဲ ခံချင်လို့ လား?တပ်မတော်ကို အမြင်စောင်းနေကြတဲ့ ပြည်သူအချို့ ရဲ့ သူရဲကောင်းကြီး ဖြစ်ချင်လို့ လားဆိုတာကတော့ လင်းလင်းမှလွဲပြီး မည်သူမျှသိနိုင်မည် မဟုတ်ပေ။
▼ Aug 23 (43)
အထိုင်များသော အလုပ်ကြောင့် စောစောစီးစီး သေဆုံးစေနိ...
ရန်ကုန်မြို့လယ်ကောင် ယာဉ်ရပ်နားမှုအား စင်ကာပူနိုင်င...
လိင်တူချစ်သူဖြစ်ကြောင်း ဝမ့်ဝေါ့သ်မေလာ ထုတ်ဖော်ပြေ...
ဗိုလ်ချုပ်၏ စိတ်ရင်းမူကို သဘောထားသင့်ကြောင်း ဆရာတေ...
နိုင်ငံတကာ ခိုးဝင်နေကြတဲ့ မွတ်စလင်တွေအတွက် ဘန်ကောက...
အမြန်လမ်းမမှာ တောင်ပေါ်သားအဝေးပြေးကား မြောင်းထဲထိုး...
KIA မှ အမည်စာရင်းကောက်ထားသော ဒေသခံလူငယ်များအား လူသ...
ဂျကာတာ မြန်မာသံရုံး ဗုံးခွဲရန် ကြံစည်သူ ၈ ဦး ထပ်မံ...
ကော်ရှူခြင်းကို ဥပဒေပြုထုတ်ပြန်ပြီး တားဆီးနိုင်ရန်စ...
ဒလမြို့နယ် ကျန်စစ်သားရပ်ကွက် အတွင်းရှိ အိမ်ထောင်စု...
တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနှင့် လုံခြုံရေးအတွက် အဓိကရုဏ်း...
အလှကြိုက်သူ မိန်းကလေးများနှင့် ခြေစွယ်ငုပ်ခြင်း အေ...
ငြိမ်းချမ်းရေးဖခင်ကြီး အလင်္ကာကျော်စွာ သခင်ကိုယ်တော်...
ပုသိမ်ခရိုင်သို့ ခိုးဝင်လာသည့် ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နိုင်င...
မိန်းကလေးများ နှစ်သက်သော ယောက်ျားများ။
လေယာဉ်မတော်တဆမှု စက်ချို့ယွင်းချက်ကြောင့် မဟုတ်ဟုဆိ...